January 2017 | Language Century Language Century
10:54 PM J-Kanji , Japanese
学 ဆိုတာက “သင်ယူလေ့လာခြင်း” ပါ။ သင်ရော ဘာသာစကားတွေကို လေ့လာသင်ယူရတာ စိတ်ဝင်စားပါသလား။
10:48 PM J-Kanji , Japanese
“မျက်လုံး။ မျက်စိ” ကိုတော့ 目 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဂျပန်နဲ့ တရုတ် ဆက်စပ်နေတဲ့ ဝေါဟာရလေးတွေကို ဆက်လက် လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
10:43 PM J-Kanji , Japanese
口 ဆိုတာ “ပါးစပ်၊ အပေါက်” စတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။ ဒီစာလုံးလေးက စုတ်ချက် သုံးချက်ပဲ ရှိသလို ရေးရလည်း လွယ်ကူပါတယ်။
10:36 PM J-Kanji , Japanese
သင် လက်ဘက်ရည် သောက်ရတာ ကြိုက်ပါသလား။ လက်ဘက်ရည်ကို 茶 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆက်စပ်ဝေါဟာရတွေကိုလည်း လေ့လာကြပါစို့။
10:31 PM J-Kanji , Japanese
“စိတ်၊ နှလုံးသား” ကိုတော့ 心 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဂျပန်ဝေါဟာရများနှင့် တရုတ်ဝေါဟာရများကို ဆက်စပ်လေ့လာကြပါစို့။
9:08 PM J-Kanji , Japanese
手 ဆိုတာက “လက်” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ ဒီစာလုံးလေးရဲ့ ဆက်စပ်ဝေါဟာရတွေကို ဂျပန်လိုရော တရုတ်လိုပါ လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
9:00 PM C-Draw , Chinese
和 ဆိုတာက “ငြိမ်းချမ်းရေး” လို့ အဓိပ္ပာယ်ရသလို၊ စကားဆက်အနေနဲ့ သုံးရင် “နဲ့၊ နှင့်” လို့လည်း အဓိပ္ပာယ်ရပါသေးတယ်။
8:56 PM C-Draw , Chinese
鱼 ဆိုတာက မြန်မာလို “ငါး” ကို ခေါ်တာပါ။ သင်ရော ပင်လယ်စာတွေထဲမှာ ငါးကို ကြိုက်ပါသလား၊ ပုစွန်ကို ကြိုက်ပါသလား။
3:28 AM C-Joke , Chinese
တရုတ်ဘာသာစကားမှာလည်း မြန်မာစကားလိုပဲ သံတူကြောင်းကွဲစကားလုံးတွေ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ်လိုရာပဲ ဆွဲတွေးလိုက်ရင် အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခွ ထွက်တာပေါ့နော်။
小 明 的 爷 爷 是 个 酒 鬼 。
Xiǎomíng de yéye shì ge jiǔguǐ.
ရှောင်မိန်ရဲ့ အဘိုးက ယစ်ထုတ်ကြီးပါ။
一 天 ，小 明 去 爷 爷 家 ，对 爷 爷 说 ：“ 爷 爷 ，好 久 不 见 了 ！”
Yìtiān, Xiǎomíng qù yéye jiā, duì yéye shuō: "yéye, hǎojiǔ bújiàn le!"
တစ်နေ့မှာ ရှောင်မိန်က အဘိုးအိမ်သွားတော့၊ အဘိုးကို ပြောလိုက်တယ် " အဘိုး၊ မတွေ့တာ အတော်ကြာပြီနော်"
爷 爷 突 然 跳 起 来 ，说 ：“ 什 么 ？好 酒 不 见 了 ？谁 偷 了 我 的 好 酒 ？”
Yéye tūrán tiào qǐ lái, shuō: "shénme? Hǎojiǔ bújiàn le? Shéi tōu le wǒ de hǎojiǔ?"
အဘိုးက ရုတ်တရက် ထခုန်လိုက်ပြီး၊ ပြောလိုက်တယ်၊ "ဘာ... အရက်ကောင်းတွေ မတွေ့တော့ဘူး.. ဟုတ်လား... ငါ့အရက်ကောင်းတွေကို ဘယ်သူ ခိုးသွားတာလဲ"
★ သံတူကြောင်းကွဲ သတိပြု
တရုတျဘာသာစကားမှာလညျး မွနျမာစကားလိုပဲ သံတူကွောငျးကှဲစကားလုံးတှေ ရှိနပေါတယျ။ အဲဒီတော့ ကိုယျလိုရာပဲ ဆှဲတှေးလိုကျရငျ အဓိပ်ပာယျနှဈခှ ထှကျတာပေါ့နျော။
ရှောငျမိနျရဲ့ အဘိုးက ယဈထုတျကွီးပါ။
တဈနမှေ့ာ ရှောငျမိနျက အဘိုးအိမျသှားတော့၊ အဘိုးကို ပွောလိုကျတယျ " အဘိုး၊ မတှတေ့ာ အတျောကွာပွီနျော"
အဘိုးက ရုတျတရကျ ထခုနျလိုကျပွီး၊ ပွောလိုကျတယျ၊ "ဘာ... အရကျကောငျးတှေ မတှတေ့ော့ဘူး.. ဟုတျလား... ငါ့အရကျကောငျးတှကေို ဘယျသူ ခိုးသှားတာလဲ"
★ သံတူကွောငျးကှဲ သတိပွု
3:15 AM C-Draw , Chinese
“ပြာသော။ ပြာသည်” စတဲ့ အရောင်ကိုတော့ တရုတ်လို 蓝 လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သင်ရော ဘာအရောင်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါသလဲ။
3:10 AM C-Draw , Chinese
帕 ဆိုတာက “လက်ကိုင်ပုဝါ” ကို ခေါ်တာပါ။ ဒီနေ့တော့ ဒီတရုတ်စာလုံးလေးကိုပဲ အရေးလေ့ကျင့်ကြတာပေါ့နော်။
3:03 AM C-Draw , Chinese
力 ဆိုတာက မြန်မာလို “အင်အား။ အား” စတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါ။ ဒီစာလုံးလေးက စုတ်ချက်နှစ်ချက်ပဲ ရှိပြီး ရေးရလွယ်ကူတဲ့ စာလုံးလေးတစ်လုံးပါ။
12:51 AM C-Knowledge , Chinese
တရုတ်သိုင်းဇာတ်ကားများထဲမှ အထင်ကရရှိသည့် သိုင်းပညာများ - အတွဲ ၂။
Credit - မှတ်စုကြမ်း
ကျိူ့ရင်းကျန်းကျင်းနှင့် ကျိူ့ရန်ကျန်းကျင်း
九陰真經 Vs 九陽真經
မှတ်စုကြမ်းမှ သိုင်းလောကပရိတ်သတ်များ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ တရုတ်သိုင်းကားထဲမှ သိုင်းပညာများအကြောင်းကို ထပ်မံ ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတပတ်မှာတော့ ပါဝင်ကူညီရေးသားပေးသူ ကိုကိုး ရန်ယင်းဟယ် 杨英和 က ကျိူ့ရန်ကျန်းကျင်းကို ရေးပေးထားတာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် 林始皇 လင်းစစ့်ဟွမ် (SwamHtet) ကတော့ ကျိူ့ရင်းကျန်းကျင်းကို ဖော်ပြပေးမှာပါ။ အဆင်ပြေရင် ကျွန်တော်တို့ မှတ်စုကြမ်းကနေ ထပ်မံရေးသားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“ 九陽真經 နေစင်္ကြာအတွင်းအားကျင့်စဉ်”
နေစင်္ကြာအတွင်းအားကျင့်စဉ်သည် သိုင်းဝထ္တုဆရာကြီး ကျင်းရုံ ရေးသားသော သိုင်းဝတ္တုပါ အဆင်မြင့်ဆုံးသော အတွင်းအားကျင့်စဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သူ၏ စွမ်းအားမှာ ရှောင်လင်ဂိုဏ်း၏ ထိပ်သီး နတ်အတွင်းအား ယိကျင်းကျင့်စဉ်နှင့် နင်လားငါလားပင်။ ကျင်းရုံဝထ္တု တွင် နေစင်္ကြာအတွင်းအားကျင့်စဉ်ကို အစအဆုံး အပြည့်အ၀ ကျင့်ဖူးသူမှာ ကျင့်စဉ်ထွင်သူမှလွဲပြီး သိမ်းငှတ်သူရဲကောင်းဝထ္တု နဂါးနိုင်ဓားဝထ္တုပါ ကြွယ်းယွမ်ကိုယ်တော်၊ နဂါးနိုင်ဓားမှ ကျန်းဝူကျိ ၂ ဦးသာရှိသည်။
ထိုကျင့်စဉ်ကို အိန္ဒိယဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ကြီး တာမို့ဆရာတော်က ရေးသားခဲ့ပြီး မဟာယာဗုဒ္ဓကျမ်းစာတွင် ဟင်ဒီစာလုံးများနှင့် ရေးသားထားသော လင်္ကာဘတ္တရသုတ် စာအုပ်ကြားတွင် ညှပ်ထားခဲ့ပြီး ရှောင်လင်ကျောင်းတွင် သိမ်းထားသည်။
ကျန်းကျွင်းပေါင် (နောင်တွင် ၀ူတန်းဂိုဏ်းထောင်သူ ကျန်းစန်းဖုန်း ငယ်ဘ၀ ရှောင်လင်တွင် အရပ်သားတပည့်) က သိုင်းစာအုပ်မှန်း ရိပ်မိသည်။ သိမ်းငှတ်သူရဲကောင်း (ဂူးဂူး) တွင်ရန်ကော်မှ ရွှေဘီးပျံဘုရင်ကို အနိုင်ယူပြီးနောက် မွန်ဂိုသိုင်းဆရာယင်းခေါ့ရှီးနှင့် ရှောင်းရှမ်းကျစ့်မှာ စုန်းဆန်းတောင်ပေါ် ထွက်ပြေးလေသည်။ ထိုိစဉ် ကျန်းကျွင်းပေါင်မှာ စုန်းဆန်းတောင်ပေါ်ရှိ ရှောင်လင်ကျောင်းတော်တွင် လင်္ကာဘတ္တရသုတ်ကို ဖတ်နေသည်။ ထိုစဉ် ယင်းခေါ့ရှီးရောက်လာပြီး ကျန်းကျွင်းပေါင်ကို အကြောပိတ်ပြီး လကာင်္ဘတ္တရသုတ် ကျမ်းစာအုပ်ကိုို လုယူသွားလေသည်။ ကျန်းကျွင်းပေါင် ဆရာကြွယ်းယွမ်က ယင်းခေါ့ရှီးနှင့် ရှောင်းရှမ်းကျစ့် နောက်လိုက်လာလေရာ ဟွာစန်းတောင်အရောက်တွင် ရန်ကော် ဂူးဂူး ကောရှမ်းတို့နှင့် ဆုံမိလေသည်။ ယင်းခေါ့ရှီးနှင့် ရှောင်းရှမ်းကျစ်မှာ ပြေးမလွတ်မှန်း သိသဖြင့် နီးစပ်ရာတွင် ရှိနေသည့် လူဝံကြီးတစ်ကောင်ကို သိုင်းနှင့်ချပြီး လူဝံကြီး ဗိုက်ခွဲပြီး ကျမ်းစာအုပ်ကို ထည့်ပြီး ချူ ပ်လိုက်လေသည်။ ရန်ကော်တို့မှီလာပြီး ယင်းခေါ့ရှီးနှင့် ရှောင်းရှမ်းကျစ် ကိုယ်ပေါ်တွင် ကျမ်းစာအုပ် မတွေ့သဖြင့် ပြန်လွှတ်လိုက်လေသည်။ ယင်းခေါ့ရှီးနှင့် ရှောင်းရှမ်းကျစ့်မှာ လူဝံကြီးကို သယ်ပြီး ရှီးယွိ ခေါ် အနောက်ဒေသသို့ သွားလေသည်။ သူတို့နှစ်ဦးမှာ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် သိုင်းကျမ်းရသွားမည် စိုးသဖြင့် အကောက်ကြံကြလေရာ ခွန်းလွန်တောင်ပေါ် အရောက်တွင် နှစ်ဦးလုံးထိနာပြီး သေဆုံးသွားလေသည်။ ထိုမှစပြီး သိုင်းကျမ်းမှာ လူဝံကြီး ကိုယ်ထဲတွင် ရှိနေသည်။ ယင်းခေါ့ရှီး မသေခင် ခွန်းလွန်သုံးဖော်မှ ဟော်ကျူ တောက်ကို မှာကြားလေသည်။ မိမိမိုက်ပစ်ကို ဝန်ခံသည့် အနေနှင့် ရှောင်လင်မှ ကြွယ်ယွမ်ကိုယ်တော်ထံ
ကျမ်းစာသည် လူဝံကိုယ်ထဲမှာဟု မှာကြားခိုင်းလေသည်။ လူဝံကို တရုတ်လို 猿 Yuan ယွမ် ဟုခေါ်သည်။ သို့သော် သေအံ့ဆဲဆဲ မှာကြားသည် ဖြစ်သောကြောင့် စကားမရှင်း၊
ဟော်ကျူ တောက် ကြားမိသည်မှာ စာအုပ်သည် ဆီ 油 You ထဲမှာဟု ထင်လေသည်။ လူဝံ(ယွမ်)
猿 မှ ဆီ(ယို) 油 အသံနားထောင်မှားခြင်းပင်။
စာကြွင်း။ ။ ထို့ကြောင့် တစုံတခု ငြင်းလို ပြောလိုပါက ကျွန်တော်တို့ဆီကို စာလုံးသာရေးပေးပါလို့ ပြောရတာပါ။ တရုတ်ဘာသာပြန်ရတာဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ရတာနဲ့ မတူပါဘူး။ စာလုံးအပေါ်မှာပဲ အဓိပ္ပါယ်မူတည်တာမို့ အသံထွက်နဲ့ လာပြောပါက တခါတရံ နားလည်မှု ကွဲလွဲနိုင်တာကြောင့် မူရင်းစာလုံးတိုင်းသာ ကွဲလွဲချက်ရှိပါက လာပြပေးပါ။
တကယ်ပင် ဟော်ကျူ တောက်က ကတိအတိုင်း ခွန်းလွန်မှ ရှောင်လင်ထိ ခရီးဝေးလာပြီး ကြွယ်ယွမ်ကိုယ်တော်ကို ကျမ်းစာသည် ဆီထဲမှာ ဟုလာပြောလေသည်။ ကြွယ်ယွမ်က မယုံ။ သို့သော် ရှောင်လင်အတွက် ကျမ်းစာပျောက် မဟာအရှုပ်တော်ပုံ ဖြစ်သွားလေရာ။ ကြွယ်ယွမ်ကိုယ်တော်က ကျန်းကျွင်းပေါင်၊ ကောရှမ်းတို့ကို ခေါ်ပြီး ရှောင်လင်မှ ထွက်ပြေးလေသည်။ ကြွယ်ယွမ်ကိုယ်တော်
ပျံလွန်တော်မမူခင် ကျိူ့ရန်ကျန်းကျင်း နေစင်္ကြာကျင့်စဉ်ကို ရွတ်ဆိုလေသည်။ ကေားရှမ်း၊ ကျန်းကျွင်းပေါင်၊ ၀ူစဲ့ကိုယ်တော်တို့ ဘေးမှ နာယူလေသည်။ ၀ူးစဲ့ကိုယ်တော်မှာ နာယူသူသုံးဦးတွင်သိုင်းပညာအဆင့်မြင့်ဆုံး ဖြစ်လေရာ သိုင်းတက်ပြ်ီးသူ ဖြစ်သောကြောင့် သဘောပေါက်လွယ်သည်။ ကောရှမ်းမှာ နားလည်မှု နည်းသည်။ အကြောင်းမှာ ကောရှမ်း မူလက တက်ထား ဖတ်ထားသည့် ပညာက များလေသည်။ ကျန်းကျွင်းပေါင်မှာ နားလည်သည်က အများဆုံးပင်၊ အကြောင်းမှာ အခြေခံသိုင်းမတက်သဖြင့် သင်ယူလက်ခံမှုမှာ အရိုးရှင်းဆုံး နားလည်လက်ခံမှု ဖြစ်လေသည်။ နောင်တွင် ကေားရှမ်းနှင့် ကျန်းကျွင်းပေါင် လမ်းခွဲပြီး ကောရှမ်းက အော်မေဂိုဏ်း၊ ကျန်းကျွင်းပေါင်က ၀ူတန်းဂိုဏ်း ထောင်လေသည်။ နာခဲ့ဖူးသည့် နေစကြာင်္ကျင့်စဉ်ကို အခြေခံပြီး ဂိုဏ်းထောင်ကြခြင်းပင်၊ ထို့နောက် ရှောင်လင်နေစကြာင်္ကျင့်စဉ်၊ ၀ူတန်းနေစကြာင်္
ကျင့်စဉ်၊ အော်မေ့နေစကြာင်္ ကျင့်စဉ် ၃မျိူး ဖြစ်လာလေသည်။ နဂါးနိုင်ဓားဇာတ်လမ်းတွင်
ကျန်းဝူကျိ ခွန်းလွန်တောင်ကြားမှ မတော်တဆရောက်ရှိရာမှ လူဝံကြီး၏ ဗိုက်ဒဏ်ရာကို ကုပေးရင်း ကျမ်း စာအုပ်ထုတ်ယူပြီး အပြည့်စုံဆုံး နေစကြာင်္ ကျင့်စဉ်ကို ကျင့်နိုင်ခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်မှ ရေခဲလက်ဝါးအဆိပ် ပျောက်ကင်းလေသည်။ ငါးနှစ်ကြာ လျိူထဲတွင်ကျင့်ရင်း ပြည့်စုံပြီး သူ့အတွင်းအားမှာ ထိပ်သီးအဆင့်ရောက်ခဲ့သည်။ 九陽真經 ကျိူ့ရန်ကျန်းကျင်း နေစင်္ကြာအတွင်းအား ကျင့်စဉ်မှာ သိုင်း မဟုတ် အတွင်းအားကျင့်စဉ်သာ ဖြစ်ပြီး သိုင်းလောက၌ မည်သည့် သိုင်းမဆိုဒဏ်ရာ မရစေနိုင်ဟုဆိုသည်။
九陰真經 ကျိူ့ရင်းကျန်းကျင်း
ကျိူ့ရင်းကျန်းကျင်းမှာ သိုင်းကျမ်းဖြစ်ပြီး ကျိူ့ရင်း သိုင်းကျမ်းဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ သစုန့်ခေတ်၌ စုန့်မင်းဆက်၏ ဘုရင် ဟွေ့ကျူံးလက်ထက်တွင် နန်းတွင်းအရာရှိ ဟွမ်ချန် 黃裳 ကို တနိုင်ငံလုံးတွင် ရှိနေသည့် သိုင်းကျမ်းများ ဆေးပညာ အတွင်းအားကျင့်စဉ် ပြန်လည်ကုသနည်း တာအိုဘာသာရပ် စသည်တို့ကို ပြုစုရေးသားစေသည်။ ဟွမ်ချန်သည် ရေးသားပြုစုရာတွင် ဂရုတစိုက် ရေးသားသဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် သိုင်းပညာတို့၏ အကြောင်းနှင့် တာအိုဘာသာတွင် ပါရှိနေသည့် အတွင်းအားနှင့် ချီ သုံးသပ်ဆင်ခြင်မိသည်။ ဟွမ်ချန်သည် ညဏ်ရည် ထက်မြတ်သူဖြစ်ပြီး အသိပညာတို့နှင့် ပေါင်းစပ်သည့်အခါ သိုင်းပညာမတတ်သော်လည်း သိုင်းပညာတို့၏ အနှစ်သာရကို သိရှိလာပြီး သိုင်းပညာကို ကျွမ်းကျင်လာခဲ့သည်။
သိပ်မကြာခင် တစုန့်တွင် ပါရှန်း (ပါရှား ယနေ့ခေတ် အီရန်) လူမျိူးတို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဘုရင်ကို ပုန်ကန်သည့် လူများ တည်ထောင်လိုက်သော မင်ဂိုဏ်း ပေါ်ထွက်လာသည်။ ဘုရင်သည် ဟွမ်ချန်ကို စစ်တပ်ဦးစီခန့်အပ်ကာ နှိမ်နင်းစေသည်။ အစပိုင်းတွင် စုန့်တပ် တပ်ပျက်ပြီး ဟွမ်ချန်ကို ရန်သူတို့ လက်ရဖမ်းမိခဲ့ပြီး ရဲတိုက်ထဲတွင်
ချူ ပ်နှောင်ထားသည်။ ဟွမ်ချန်သည် မင်ဂိုဏ်းမှ လူများကို တစ်ဦးချင်းစီ စိန်ခေါ်ကာ တချက်တည်းဖြင့် သတ်ဖြတ်ပြီး နှိမ်နင်းခဲ့ရာ မင်ဂိုဏ်းပျက်ပြီး ဟွမ်ချန်မှာ တစ်ဦးတည်း ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် သူရဲကောင်း ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ဟွမ်ချန်သည် နှစ်ပေါင်း ၄၀ တိုင်အောင် မင်ဂိုဏ်းမှ ရရှိခဲ့သော သိုင်းပညာများနှင့် တခြားဂိုဏ်းများမှ သိုင်းပညာများကို လေ့လာပြုစုပြီး အတွဲ ၂ တွဲဖြင့် ရေးသားထားသော စာအုပ်ကျမ်းကို ပြုစုခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်ကျမ်းသည် သိုင်းလောကရှိ သိုင်းကျမ်းတို့၏ အနှစ်ချူ ပ် ဖြစ်ပြီး ဟွမ်ချန်၏ လေ့လာချက်များကနေ သူကိုယ်တိုင် အသစ်တီထွင်ထားသော သိုင်းပညာများ ပါဝင်နေသည်။
ဟွမ်ချန်သေဆုံးပြီး ကျမ်းစာအုပ်မှာ ပျောက်ဆုံးခဲ့သော်လည်း တစ်နေ့တွင် သိုင်းလောကထဲ၌ ပြန်ပေါ်လာခဲ့ရာ သိုင်းလောကတွင် သွေးချောင်းစီးတိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သွေးချောင်းစီးမှုကို ရပ်တန့်နိုင်ရန် ဟွာစန်းတောင်ပေါ်တွင် သိုင်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို ပြုလုပ်စေသည်။ ထိုပြိုင်ပွဲတွင် သိုင်းလောက၏ ထိပ်သီးငါးဦးဖြစ်သည့် အလယ်ပိုင်းတန်ခိုးရှင် ဝမ်ချူံရန် အရှေ့ပိုင်းမှ မိစ္ဆာသခင် ဟွမ်ယောင်ရှစ့် အနောက်ပိုင်းမှ အဆိပ်ဘုရင် အိုးရန်ဖုန်း မြောက်ပိုင်းမှ သူတောင်းစားဂိုဏ်းချူ ပ် ဟုန်ချီကုန်း တောင်ပိုင်းဘုရင် သလီဘုရင် သွမ့်ကျိရှင်းတို့ ဖြစ်ကြပြီး အနိုင်ရရှိသူမှာ ကျမ်းစာအုပ်ကို ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ အလယ်ပိုင်း တန်ခိုးရှင် ဝမ်ချူံရန် အနိုင်ရရှိပြီး ကျမ်းစာအုပ်ကို သူ၏ ချွမ်ကျန်းဂိုဏ်းတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။
ထိုနေရာတွင် တစ်ခုပြောချင်တာက ဝမ်ချူံရန်နှင့် ချွမ်ကျန်းဂိုဏ်းကတော့ သစုန့်ခေတ်မှာ အမှန်တကယ် ရှိခဲ့ပြီး တာအိုဂိုဏ်းတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားပါတယ်။
ဝမ်ချူံရန်ဟာ သူ့ညီ ကျိူးပေါ်ထုံးကို သိုင်းကျမ်း အပ်ခဲ့ပြီး သေဆုံးပြီဟု ဟန်ဆောင်ကာ သတင်းလွှင့်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ အိုးရန်ဖုန်းမှ ခေါင်းတလားထဲမှ ဝမ်ချူံရန်လက်ထဲရှိ စာအုပ်ကို ယူစဉ် ဝမ်ချူံရန်မှာ ရုတ်တရတ် အိုးရန်ဖုန်းကို တိုက်ခိုက်သည့်အခါ အ်ိုးရန်ဖုန်း ရှုံးနိမ့်ပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက် ဝမ်ချူံရန်မှ သူ၏ ဂိုဏ်းသားများကို ကျိူ့ရင်းကျန်းကျင်းကို မည်သူမှ မလေ့ကျင့်စေရဟု အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပြီးနောက် အမှန်တကယ် သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
စာရှည်သွားမှာစိုးလို့ ကျန်တာတော့ ထည့်မရေးတော့ပါဘူး။ မက်မွန်မြေက ချစ်တေးတပုဒ်ထဲက အတိုင်းပဲ ကောကျင့်ဟာ မမျှော်လင့်ပဲ ကျမ်းစာအုပ် ၂ အုပ်တွဲလုံး ရရှိခဲ့သလို ကျိူးပေါ်ထုံးမှာလည်း ကောကျင့်ကို သင်ကြားပေးရင်း သူပါ တတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် ကောကျင့်နှင့် ဟွမ်ရုံတို့ဟာ မက်မွန်ကျွန်းမှာ အတူနေထိုင်နေစဉ် ကောကျင့်ဟာ နဂါးနိုင်ဓားနှင့် တိမ်လွှာဓားကို သွန်းလုပ်ပြီး နဂါးနိုင်ဓားထဲတွင် ဝူမု စစ်ဗျူ ဟာကျမ်း တိမ်လွှာဓားထဲတွင် ကျိူ့ရင်းကျန်းကျင်း ကျမ်းစာအုပ်ပါ ကျိူ့ရင်းလက်သည်းဖြူ သိုင်း အသည်းခြွေမွသိုင်း ကြာပွတ်ဖြူ သိုင်းပညာတို့ကို ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။
ကောကျင့်၏ သမီးဖြစ်သူ ကောရှမ်း (နောင်တွင် အော်မေ့ဂိုဏ်းချူ ပ်) ဟာ တိမ်လွှာဓားရဲ့ တကယ့် လျှူိ့ဝှက်ချက်ကို သူတစ်ဦးပဲ သိထားပါတယ်။ ဂိုဏ်းချူ ပ်ရာထူးကို ဆက်ခံသူကိုသာ ပြောပြမည်ဟုလည်း ဆုံးဖြတ်ထားသည်။
အဲ့နောက်မှာတော့ အော်မေ့ဂိုဏ်းရဲ့ တတိယမြောက် ဂိုဏ်းချူ ပ်ဖြစ်တဲ့ မြဲ့ကြွယ်ဆရာတော်ဟာ သူ့တပည့်ဖြစ်သူ ကျိူးကျစ်လော့ကို ဓားအတွင်းမှ လျှိူ့ဝှက်ချက်တို့ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ ကျစ်လော့မှ နဂါးနိုင်ဓားကို တွေ့အောင် ရှာနိုင်ခဲ့ပြီး ဓား ၂ လက်ကို အချင်းချင်း ရိုက်ချိူးလိုက်ရာမှ ဓားအတွင်း၌ ဖွက်ထားသော ကျိူ့ရင်းကျန်းကျင်း သိုင်းကျမ်းစာရွက် စစ်ဗျူ ဟာစာရွက် ထွက်ကျလာပါတယ်။ ကျိူးကျစ်လော့လည်း မေခြောက်ဖုံနည်းတူပဲ သူလည်း စတင်လေ့ကျင့်ပါတော့တယ်။
တစ်ခုပြောစရာကျန်ခဲ့တာက မြဲ့ကြွယ်ဆရာတော်ဟာ မိန်ဂိုဏ်းနဲ့ ကျန်းဝူကျိကို ရန်ငြိုးထားရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက မြဲ့ကြွယ်ငယ်စဉ်က သူ့မိဘတွေကို မိန်ဂိုဏ်းသားတွေက သတ်ခဲ့တာကြောင့် ကျန်းဝူကျိနဲ့ မိန်ဂိုဏ်းအပေါ်မှာ ရန်ငြိုးထားလွန်းနေတာပါပဲ။
အဲ့နောက်မှာတော့ ကျိူးကျစ်လော့နဲ့ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားကြပြီးနောက် ကျိူးကျစ်လော့နှင့် ရန်ကော် ရှောင်လုံနွီတို့၏ မျိူးဆက်ဖြစ်သူ အဝါရောင်ဝတ်စုံ ဝတ်တင်ထားသော ဝါးရုံသခင်မနှင့် တိုက်ခိုက်ရာတွင် အဝါရောင်သခင်မဟာ ကျိူ့ရင်းရဲ့ သမာရိုးကျ မိစ္ဆာဓာတ်မပါတဲ့ ကျိူ့ရင်းကျန်းကျင်းနဲ့ပဲ အလွယ်တကူ အနိုင်ပြသွားပါတယ်။ နောက်ဆုံး ရွှယ်မိန်ကိုယ်တော်ရဲ့ ရွှယ်မိန်နတ်သိုင်းကြောင့် ကျိူးကျစ်လော့ဟာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကျန်းဝူကျိဟာ သူ့ရဲ့ ကျိူ့ရန်ကျန်းကျင်းနဲ့ ကယ်ပေမယ့် ကျိူ့ရင်းကျန်းကျင်း အတွင်းအားကြောင့် ကယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။
ဒီလောက်ဆို ကျိူ့ရန်ကျန်းကျင်းနဲ့ ကျိူ့ရင်းကျန်းကျင်း အကြောင်းသိကြပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အရင်တခါလိုပဲ မေးခွန်းတစ်ခု မေးပါမယ်။ တကယ်လို့ ကျိူ့ရန်ကျန်းကျင်းနဲ့ ကျိူ့ရင်းကျန်းကျင်း တတ်တဲ့လူ ၂ ဦး တိုက်ခိုက်ရင် ဘယ်သူသာမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ထို သိုင်းပညာတွေဟာ တရုတ် ယင်းနဲ့ ရန် အဖိုဓာတ်နဲ့ အမဓာတ်ကို အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သိုင်းပညာ ၂ ခုလုံးဟာလည်း ထိပ်သီးကျင့်စဉ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
杨英和 နှင့် 林始皇 #SwamHtet(မှတ်စုကြမ်း)
မှတ်ချက်။ ။ cmt တွင် ဆဲဆိုခြင်းများ မပြုလုပ်ကြပါနဲ့လို့ ကြိုပြောထားပါရစေ။
တရုတျသိုငျးဇာတျကားမြားထဲမှ အထငျကရရှိသညျ့ သိုငျးပညာမြား-အတှဲ ၂
ကြိူ့ရငျးကနျြးကငျြးနှငျ့ ကြိူ့ရနျကနျြးကငျြး
မှတျစုကွမျးမှ သိုငျးလောကပရိတျသတျမြား စိတျဝငျစားကွတဲ့ တရုတျသိုငျးကားထဲမှ သိုငျးပညာမြားအကွောငျးကို ထပျမံ ရေးသားပေးလိုကျပါတယျ။ ဒီတပတျမှာတော့ ပါဝငျကူညီရေးသားပေးသူ ကိုကိုး ရနျယငျးဟယျ 杨英和 က ကြိူ့ရနျကနျြးကငျြးကို ရေးပေးထားတာ ဖွဈပွီး ကြှနျတျော 林始皇 လငျးစဈ့ဟှမျ (SwamHtet) ကတော့ ကြိူ့ရငျးကနျြးကငျြးကို ဖျောပွပေးမှာပါ။ အဆငျပွရေငျ ကြှနျတျောတို့ မှတျစုကွမျးကနေ ထပျမံရေးသားပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
“ 九陽真經 နစေင်ျကွာအတှငျးအားကငျြ့စဉျ”
နစေင်ျကွာအတှငျးအားကငျြ့စဉျသညျ သိုငျးဝထ်တုဆရာကွီး ကငျြးရုံ ရေးသားသော သိုငျးဝတ်တုပါ အဆငျမွငျ့ဆုံးသော အတှငျးအားကငျြ့စဉျ တဈရပျဖွဈသညျ။ သူ၏ စှမျးအားမှာ ရှောငျလငျဂိုဏျး၏ ထိပျသီး နတျအတှငျးအား ယိကငျြးကငျြ့စဉျနှငျ့ နငျလားငါလားပငျ။ ကငျြးရုံဝထ်တု တှငျ နစေင်ျကွာအတှငျးအားကငျြ့စဉျကို အစအဆုံး အပွညျ့အ၀ ကငျြ့ဖူးသူမှာ ကငျြ့စဉျထှငျသူမှလှဲပွီး သိမျးငှတျသူရဲကောငျးဝထ်တု နဂါးနိုငျဓားဝထ်တုပါ ကွှယျးယှမျကိုယျတျော၊ နဂါးနိုငျဓားမှ ကနျြးဝူကြိ ၂ ဦးသာရှိသညျ။
ထိုကငျြ့စဉျကို အိန်ဒိယဗုဒ်ဓဘုနျးတျောကွီး တာမို့ဆရာတျောက ရေးသားခဲ့ပွီး မဟာယာဗုဒ်ဓကမျြးစာတှငျ ဟငျဒီစာလုံးမြားနှငျ့ ရေးသားထားသော လင်ျကာဘတ်တရသုတျ စာအုပျကွားတှငျ ညှပျထားခဲ့ပွီး ရှောငျလငျကြောငျးတှငျ သိမျးထားသညျ။
ကနျြးကြှငျးပေါငျ (နောငျတှငျ ဝူတနျးဂိုဏျးထောငျသူ ကနျြးစနျးဖုနျး ငယျဘ၀ ရှောငျလငျတှငျ အရပျသားတပညျ့) က သိုငျးစာအုပျမှနျး ရိပျမိသညျ။ သိမျးငှတျသူရဲကောငျး (ဂူးဂူး) တှငျရနျကျောမှ ရှဘေီးပြံဘုရငျကို အနိုငျယူပွီးနောကျ မှနျဂိုသိုငျးဆရာယငျးခေါ့ရှီးနှငျ့ ရှောငျးရှမျးကစျြ့မှာ စုနျးဆနျးတောငျပျေါ ထှကျပွေးလသေညျ။ ထိုစဉျ ကနျြးကြှငျးပေါငျမှာ စုနျးဆနျးတောငျပျေါရှိ ရှောငျလငျကြောငျးတျောတှငျ လင်ျကာဘတ်တရသုတျကို ဖတျနသေညျ။ ထိုစဉျ ယငျးခေါ့ရှီးရောကျလာပွီး ကနျြးကြှငျးပေါငျကို အကွောပိတျပွီး လကာင်္ဘတ်တရသုတျ ကမျြးစာအုပျကို လုယူသှားလသေညျ။ ကနျြးကြှငျးပေါငျ ဆရာကွှယျးယှမျက ယငျးခေါ့ရှီးနှငျ့ ရှောငျးရှမျးကစျြ့ နောကျလိုကျလာလရော ဟှာစနျးတောငျအရောကျတှငျ ရနျကျော ဂူးဂူး ကောရှမျးတို့နှငျ့ ဆုံမိလသေညျ။ ယငျးခေါ့ရှီးနှငျ့ ရှောငျးရှမျးကဈြမှာ ပွေးမလှတျမှနျး သိသဖွငျ့ နီးစပျရာတှငျ ရှိနသေညျ့ လူဝံကွီးတဈကောငျကို သိုငျးနှငျ့ခပြွီး လူဝံကွီး ဗိုကျခှဲပွီး ကမျြးစာအုပျကို ထညျ့ပွီး ခြူ ပျလိုကျလသေညျ။ ရနျကျောတို့မှီလာပွီး ယငျးခေါ့ရှီးနှငျ့ ရှောငျးရှမျးကဈြ ကိုယျပျေါတှငျ ကမျြးစာအုပျ မတှသေ့ဖွငျ့ ပွနျလှတျလိုကျလသေညျ။ ယငျးခေါ့ရှီးနှငျ့ ရှောငျးရှမျးကစျြ့မှာ လူဝံကွီးကို သယျပွီး ရှီးယှိ ချေါ အနောကျဒသေသို့ သှားလသေညျ။ သူတို့နှဈဦးမှာ တဈယောကျနှငျ့ တဈယောကျ သိုငျးကမျြးရသှားမညျ စိုးသဖွငျ့ အကောကျကွံကွလရော ခှနျးလှနျတောငျပျေါ အရောကျတှငျ နှဈဦးလုံးထိနာပွီး သဆေုံးသှားလသေညျ။ ထိုမှစပွီး သိုငျးကမျြးမှာ လူဝံကွီး ကိုယျထဲတှငျ ရှိနသေညျ။ ယငျးခေါ့ရှီး မသခေငျ ခှနျးလှနျသုံးဖျောမှ ဟျောကြူ တောကျကို မှာကွားလသေညျ။ မိမိမိုကျပဈကို ဝနျခံသညျ့ အနနှေငျ့ ရှောငျလငျမှ ကွှယျယှမျကိုယျတျောထံ
ကမျြးစာသညျ လူဝံကိုယျထဲမှာဟု မှာကွားခိုငျးလသေညျ။ လူဝံကို တရုတျလို 猿 Yuan ယှမျ ဟုချေါသညျ။ သို့သျော သအေံ့ဆဲဆဲ မှာကွားသညျ ဖွဈသောကွောငျ့ စကားမရှငျး၊
ဟျောကြူ တောကျ ကွားမိသညျမှာ စာအုပျသညျ ဆီ 油 You ထဲမှာဟု ထငျလသေညျ။ လူဝံ(ယှမျ)
猿 မှ ဆီ(ယို) 油 အသံနားထောငျမှားခွငျးပငျ။
စာကွှငျး။ ။ ထို့ကွောငျ့ တစုံတခု ငွငျးလို ပွောလိုပါက ကြှနျတျောတို့ဆီကို စာလုံးသာရေးပေးပါလို့ ပွောရတာပါ။ တရုတျဘာသာပွနျရတာဟာ အင်ျဂလိပျဘာသာ ပွနျရတာနဲ့ မတူပါဘူး။ စာလုံးအပျေါမှာပဲ အဓိပ်ပါယျမူတညျတာမို့ အသံထှကျနဲ့ လာပွောပါက တခါတရံ နားလညျမှု ကှဲလှဲနိုငျတာကွောငျ့ မူရငျးစာလုံးတိုငျးသာ ကှဲလှဲခကျြရှိပါက လာပွပေးပါ။
တကယျပငျ ဟျောကြူ တောကျက ကတိအတိုငျး ခှနျးလှနျမှ ရှောငျလငျထိ ခရီးဝေးလာပွီး ကွှယျယှမျကိုယျတျောကို ကမျြးစာသညျ ဆီထဲမှာ ဟုလာပွောလသေညျ။ ကွှယျယှမျက မယုံ။ သို့သျော ရှောငျလငျအတှကျ ကမျြးစာပြောကျ မဟာအရှုပျတျောပုံ ဖွဈသှားလရော။ ကွှယျယှမျကိုယျတျောက ကနျြးကြှငျးပေါငျ၊ ကောရှမျးတို့ကို ချေါပွီး ရှောငျလငျမှ ထှကျပွေးလသေညျ။ ကွှယျယှမျကိုယျတျော
ပြံလှနျတျောမမူခငျ ကြိူ့ရနျကနျြးကငျြး နစေင်ျကွာကငျြ့စဉျကို ရှတျဆိုလသေညျ။ ကေားရှမျး၊ ကနျြးကြှငျးပေါငျ၊ ဝူစဲ့ကိုယျတျောတို့ ဘေးမှ နာယူလသေညျ။ ဝူးစဲ့ကိုယျတျောမှာ နာယူသူသုံးဦးတှငျသိုငျးပညာအဆငျ့မွငျ့ဆုံး ဖွဈလရော သိုငျးတကျွပျီးသူ ဖွဈသောကွောငျ့ သဘောပေါကျလှယျသညျ။ ကောရှမျးမှာ နားလညျမှု နညျးသညျ။ အကွောငျးမှာ ကောရှမျး မူလက တကျထား ဖတျထားသညျ့ ပညာက မြားလသေညျ။ ကနျြးကြှငျးပေါငျမှာ နားလညျသညျက အမြားဆုံးပငျ၊ အကွောငျးမှာ အခွခေံသိုငျးမတကျသဖွငျ့ သငျယူလကျခံမှုမှာ အရိုးရှငျးဆုံး နားလညျလကျခံမှု ဖွဈလသေညျ။ နောငျတှငျ ကေားရှမျးနှငျ့ ကနျြးကြှငျးပေါငျ လမျးခှဲပွီး ကောရှမျးက အျောမဂေိုဏျး၊ ကနျြးကြှငျးပေါငျက ဝူတနျးဂိုဏျး ထောငျလသေညျ။ နာခဲ့ဖူးသညျ့ နစေကွာင်္ကငျြ့စဉျကို အခွခေံပွီး ဂိုဏျးထောငျကွခွငျးပငျ၊ ထို့နောကျ ရှောငျလငျနစေကွာင်္ကငျြ့စဉျ၊ ဝူတနျးနစေကွာင်္
ကငျြ့စဉျ၊ အျောမနေ့စေကွာင်္ ကငျြ့စဉျ ၃မြိူး ဖွဈလာလသေညျ။ နဂါးနိုငျဓားဇာတျလမျးတှငျ
ကနျြးဝူကြိ ခှနျးလှနျတောငျကွားမှ မတျောတဆရောကျရှိရာမှ လူဝံကွီး၏ ဗိုကျဒဏျရာကို ကုပေးရငျး ကမျြး စာအုပျထုတျယူပွီး အပွညျ့စုံဆုံး နစေကွာင်္ ကငျြျ့စဉျကို ကငျြ့နိုငျခဲ့လသေညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကိုယျမှ ရခေဲလကျဝါးအဆိပျ ပြောကျကငျးလသေညျ။ ငါးနှဈကွာ လြိူထဲတှငျကငျြ့ရငျး ပွညျ့စုံပွီး သူ့အတှငျးအားမှာ ထိပျသီးအဆငျ့ရောကျခဲ့သညျ။ 九陽真經 ကြိူ့ရနျကနျြးကငျြး နစေင်ျကွာအတှငျးအား ကငျြ့စဉျမှာ သိုငျး မဟုတျ အတှငျးအားကငျြ့စဉျသာ ဖွဈပွီး သိုငျးလောက၌ မညျသညျ့ သိုငျးမဆိုဒဏျရာ မရစနေိုငျဟုဆိုသညျ။
九陰真經 ကြိူ့ရငျးကနျြးကငျြး
ကြိူ့ရငျးကနျြးကငျြးမှာ သိုငျးကမျြးဖွဈပွီး ကြိူ့ရငျး သိုငျးကမျြးဖွဈပျေါလာပုံမှာ သစုနျ့ခတျေ၌ စုနျ့မငျးဆကျ၏ ဘုရငျ ဟှကြေူံ့းလကျထကျတှငျ နနျးတှငျးအရာရှိ ဟှမျခနျြ 黃裳 ကို တနိုငျငံလုံးတှငျ ရှိနသေညျ့ သိုငျးကမျြးမြား ဆေးပညာ အတှငျးအားကငျြ့စဉျ ပွနျလညျကုသနညျး တာအိုဘာသာရပျ စသညျတို့ကို ပွုစုရေးသားစသေညျ။ ဟှမျခနျြသညျ ရေးသားပွုစုရာတှငျ ဂရုတစိုကျ ရေးသားသဖွငျ့ နောကျပိုငျးတှငျ သိုငျးပညာတို့၏ အကွောငျးနှငျ့ တာအိုဘာသာတှငျ ပါရှိနသေညျ့ အတှငျးအားနှငျ့ ခြီ သုံးသပျဆငျခွငျမိသညျ။ ဟှမျခနျြသညျ ညဏျရညျ ထကျမွတျသူဖွဈပွီး အသိပညာတို့နှငျ့ ပေါငျးစပျသညျ့အခါ သိုငျးပညာမတတျသျောလညျး သိုငျးပညာတို့၏ အနှဈသာရကို သိရှိလာပွီး သိုငျးပညာကို ကြှမျးကငျြလာခဲ့သညျ။
သိပျမကွာခငျ တစုနျ့တှငျ ပါရှနျး (ပါရှား ယနခေ့တျေ အီရနျ) လူမြိူးတို့နှငျ့ ပူးပေါငျးပွီး ဘုရငျကို ပုနျကနျသညျ့ လူမြား တညျထောငျလိုကျသော မငျဂိုဏျး ပျေါထှကျလာသညျ။ ဘုရငျသညျ ဟှမျခနျြကို စဈတပျဦးစီခနျ့အပျကာ နှိမျနငျးစသေညျ။ အစပိုငျးတှငျ စုနျ့တပျ တပျပကျြပွီး ဟှမျခနျြကို ရနျသူတို့ လကျရဖမျးမိခဲ့ပွီး ရဲတိုကျထဲတှငျ
ခြူ ပျနှောငျထားသညျ။ ဟှမျခနျြသညျ မငျဂိုဏျးမှ လူမြားကို တဈဦးခငျြးစီ စိနျချေါကာ တခကျြတညျးဖွငျ့ သတျဖွတျပွီး နှိမျနငျးခဲ့ရာ မငျဂိုဏျးပကျြပွီး ဟှမျခနျြမှာ တဈဦးတညျး ကနျြရဈခဲ့သညျ့ သူရဲကောငျး ဖွဈခဲ့လသေညျ။ ထို့နောကျ ဟှမျခနျြသညျ နှဈပေါငျး ၄၀ တိုငျအောငျ မငျဂိုဏျးမှ ရရှိခဲ့သော သိုငျးပညာမြားနှငျ့ တခွားဂိုဏျးမြားမှ သိုငျးပညာမြားကို လလေ့ာပွုစုပွီး အတှဲ ၂ တှဲဖွငျ့ ရေးသားထားသော စာအုပျကမျြးကို ပွုစုခဲ့သညျ။ ထိုစာအုပျကမျြးသညျ သိုငျးလောကရှိ သိုငျးကမျြးတို့၏ အနှဈခြူ ပျ ဖွဈပွီး ဟှမျခနျြ၏ လလေ့ာခကျြမြားကနေ သူကိုယျတိုငျ အသဈတီထှငျထားသော သိုငျးပညာမြား ပါဝငျနသေညျ။
ဟှမျခနျြသဆေုံးပွီး ကမျြးစာအုပျမှာ ပြောကျဆုံးခဲ့သျောလညျး တဈနတှေ့ငျ သိုငျးလောကထဲ၌ ပွနျပျေါလာခဲ့ရာ သိုငျးလောကတှငျ သှေးခြောငျးစီးတိုကျပှဲမြား ဖွဈပှားခဲ့သညျ။ ထို့ကွောငျ့ သှေးခြောငျးစီးမှုကို ရပျတနျ့နိုငျရနျ ဟှာစနျးတောငျပျေါတှငျ သိုငျးပွိုငျပှဲတဈခုကို ပွုလုပျစသေညျ။ ထိုပွိုငျပှဲတှငျ သိုငျးလောက၏ ထိပျသီးငါးဦးဖွဈသညျ့ အလယျပိုငျးတနျခိုးရှငျ ဝမျခြူံရနျ အရှပေို့ငျးမှ မိစ်ဆာသခငျ ဟှမျယောငျရှဈ့ အနောကျပိုငျးမှ အဆိပျဘုရငျ အိုးရနျဖုနျး မွောကျပိုငျးမှ သူတောငျးစားဂိုဏျးခြူ ပျ ဟုနျခြီကုနျး တောငျပိုငျးဘုရငျ သလီဘုရငျ သှမျ့ကြိရှငျးတို့ ဖွဈကွပွီး အနိုငျရရှိသူမှာ ကမျြးစာအုပျကို ရရှိမညျ ဖွဈသညျ။ အလယျပိုငျး တနျခိုးရှငျ ဝမျခြူံရနျ အနိုငျရရှိပွီး ကမျြးစာအုပျကို သူ၏ ခြှမျကနျြးဂိုဏျးတှငျ သိမျးဆညျးထားသညျ။
ထိုနရောတှငျ တဈခုပွောခငျြတာက ဝမျခြူံရနျနှငျ့ ခြှမျကနျြးဂိုဏျးကတော့ သစုနျ့ခတျေမှာ အမှနျတကယျ ရှိခဲ့ပွီး တာအိုဂိုဏျးတဈခုအဖွဈ ထငျရှားပါတယျ။
ဝမျခြူံရနျဟာ သူ့ညီ ကြိူးပျေါထုံးကို သိုငျးကမျြး အပျခဲ့ပွီး သဆေုံးပွီဟု ဟနျဆောငျကာ သတငျးလှငျ့ခဲ့ပါသညျ။ ထိုအခါ အိုးရနျဖုနျးမှ ခေါငျးတလားထဲမှ ဝမျခြူံရနျလကျထဲရှိ စာအုပျကို ယူစဉျ ဝမျခြူံရနျမှာ ရုတျတရတျ အိုးရနျဖုနျးကို တိုကျခိုကျသညျ့အခါ အိုးရနျဖုနျး ရှုံးနိမျ့ပွီး ထှကျပွေးခဲ့ရပါသညျ။ ထို့နောကျ ဝမျခြူံရနျမှ သူ၏ ဂိုဏျးသားမြားကို ကြိူ့ရငျးကနျြးကငျြးကို မညျသူမှ မလကေ့ငျြ့စရေဟု အမိနျ့ထုတျခဲ့ပွီးနောကျ အမှနျတကယျ သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။
စာရှညျသှားမှာစိုးလို့ ကနျြတာတော့ ထညျ့မရေးတော့ပါဘူး။ မကျမှနျမွကေ ခဈြတေးတပုဒျထဲက အတိုငျးပဲ ကောကငျြ့ဟာ မမြှျောလငျ့ပဲ ကမျြးစာအုပျ ၂ အုပျတှဲလုံး ရရှိခဲ့သလို ကြိူးပျေါထုံးမှာလညျး ကောကငျြ့ကို သငျကွားပေးရငျး သူပါ တတျမွောကျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့နောကျ ကောကငျြ့နှငျ့ ဟှမျရုံတို့ဟာ မကျမှနျကြှနျးမှာ အတူနထေိုငျနစေဉျ ကောကငျြ့ဟာ နဂါးနိုငျဓားနှငျ့ တိမျလှာဓားကို သှနျးလုပျပွီး နဂါးနိုငျဓားထဲတှငျ ဝူမု စဈဗြူ ဟာကမျြး တိမျလှာဓားထဲတှငျ ကြိူ့ရငျးကနျြးကငျြး ကမျြးစာအုပျပါ ကြိူ့ရငျးလကျသညျးဖွူ သိုငျး အသညျးခွှမှေသိုငျး ကွာပှတျဖွူ သိုငျးပညာတို့ကို ထညျ့သှငျးထားခဲ့သညျ။
ကောကငျြ့၏ သမီးဖွဈသူ ကောရှမျး (နောငျတှငျ အျောမဂေို့ဏျးခြူ ပျ) ဟာ တိမျလှာဓားရဲ့ တကယျ့ လြှူိ့ဝှကျခကျြကို သူတဈဦးပဲ သိထားပါတယျ။ ဂိုဏျးခြူ ပျရာထူးကို ဆကျခံသူကိုသာ ပွောပွမညျဟုလညျး ဆုံးဖွတျထားသညျ။
အဲ့နောကျမှာတော့ အျောမဂေို့ဏျးရဲ့ တတိယမွောကျ ဂိုဏျးခြူ ပျဖွဈတဲ့ မွဲ့ကွှယျဆရာတျောဟာ သူ့တပညျ့ဖွဈသူ ကြိူးကဈြလော့ကို ဓားအတှငျးမှ လြှိူ့ဝှကျခကျြတို့ကို ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ ထိုအခါ ကဈြလော့မှ နဂါးနိုငျဓားကို တှအေ့ောငျ ရှာနိုငျခဲ့ပွီး ဓား ၂ လကျကို အခငျြးခငျြး ရိုကျခြိူးလိုကျရာမှ ဓားအတှငျး၌ ဖှကျထားသော ကြိူ့ရငျးကနျြးကငျြး သိုငျးကမျြးစာရှကျ စဈဗြူ ဟာစာရှကျ ထှကျကလြာပါတယျ။ ကြိူးကဈြလော့လညျး မခွေောကျဖုံနညျးတူပဲ သူလညျး စတငျလကေ့ငျြ့ပါတော့တယျ။
တဈခုပွောစရာကနျြခဲ့တာက မွဲ့ကွှယျဆရာတျောဟာ မိနျဂိုဏျးနဲ့ ကနျြးဝူကြိကို ရနျငွိုးထားရတဲ့ အကွောငျးအရငျးက မွဲ့ကွှယျငယျစဉျက သူ့မိဘတှကေို မိနျဂိုဏျးသားတှကေ သတျခဲ့တာကွောငျ့ ကနျြးဝူကြိနဲ့ မိနျဂိုဏျးအပျေါမှာ ရနျငွိုးထားလှနျးနတောပါပဲ။
အဲ့နောကျမှာတော့ ကြိူးကဈြလော့နဲ့ တိုကျပှဲ ဖွဈပှားကွပွီးနောကျ ကြိူးကဈြလော့နှငျ့ ရနျကျော ရှောငျလုံနှီတို့၏ မြိူးဆကျဖွဈသူ အဝါရောငျဝတျစုံ ဝတျတငျထားသော ဝါးရုံသခငျမနှငျ့ တိုကျခိုကျရာတှငျ အဝါရောငျသခငျမဟာ ကြိူ့ရငျးရဲ့ သမာရိုးကြ မိစ်ဆာဓာတျမပါတဲ့ ကြိူ့ရငျးကနျြးကငျြးနဲ့ပဲ အလှယျတကူ အနိုငျပွသှားပါတယျ။ နောကျဆုံး ရှယျမိနျကိုယျတျောရဲ့ ရှယျမိနျနတျသိုငျးကွောငျ့ ကြိူးကဈြလော့ဟာ ဒဏျရာရရှိခဲ့ပွီး ကနျြးဝူကြိဟာ သူ့ရဲ့ ကြိူ့ရနျကနျြးကငျြးနဲ့ ကယျပမေယျ့ ကြိူ့ရငျးကနျြးကငျြး အတှငျးအားကွောငျ့ ကယျလို့မရခဲ့ပါဘူး။
ဒီလောကျဆို ကြိူ့ရနျကနျြးကငျြးနဲ့ ကြိူ့ရငျးကနျြးကငျြး အကွောငျးသိကွပွီလို့ ထငျပါတယျ။ အရငျတခါလိုပဲ မေးခှနျးတဈခု မေးပါမယျ။ တကယျလို့ ကြိူ့ရနျကနျြးကငျြးနဲ့ ကြိူ့ရငျးကနျြးကငျြး တတျတဲ့လူ ၂ ဦး တိုကျခိုကျရငျ ဘယျသူသာမယျလို့ ထငျပါသလဲ။ ထို သိုငျးပညာတှဟော တရုတျ ယငျးနဲ့ ရနျ အဖိုဓာတျနဲ့ အမဓာတျကို အခွခေံထားတာ ဖွဈပါတယျ။ သိုငျးပညာ ၂ ခုလုံးဟာလညျး ထိပျသီးကငျြ့စဉျတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
杨英和 နှငျ့ 林始皇 #SwamHtet(မှတျစုကွမျး)
မှတျခကျြ။ ။ cmt တှငျ ဆဲဆိုခွငျးမြား မပွုလုပျကွပါနဲ့လို့ ကွိုပွောထားပါရစေ။
12:29 AM C-Knowledge , Chinese
ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်တုန်း တရုတ်သိုင်းဇာတ်လမ်းတွဲများကို နှစ်ချိူက်စွာ ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ဖူးရင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အသက်ဟာ ၂၀ ကျော်နေပြီလို့ ရဲရဲကြီး အာမခံတယ်။
ထိုဇာတ်လမ်းတွဲများထဲတွင် ပါဝင်သော သိုင်းပညာရပ်များမှာ သိုင်းဝတ္တုရေးသားသူတို့ စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ရေးသားထားသည်မှာ မှန်သော်လည်း အများစုမှ အပြင်မှာလက်တွေ့ရှိနေသည့် သိုင်းပညာ၏ 20% ကို မှီငြမ်းထားသည်ကို တွေ့ရသလို တချိူ့မှာ အပြင်မှာ တကယ် ရှိနေသည့် သိုင်းပညာရပ်များပါ ထည့်သွင်းထားသည်။ ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် သိုင်းပညာရပ်များ၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် မူလအစ နာမည်များကိုလည်း ရံဖန်ရံခါ အသုံးချလေ့ရှိသည်။
သိုင်းလောက၏ နောက်ခံကို သစုန့်ခေတ်၌သာ Base တည်ထားသည်က များသည်။ ထိုသစုန့်ခေတ်၌ တရုတ်ပြည်သည် တိုင်းတပါးတို့၏ ရန်ကို ကြောက်ရွံ့ရသဖြင့် လူတိုင်းလိုလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ရန်နှင့် တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် သိုင်းပညာကို သင်ကြားလေ့ ရှိကြသည့် ခေတ်ကာလ ဖြစ်သဖြင့် သိုင်းဝတ္ထုများကို အခြေတည်လို့ ကောင်းသည်။ မက်မုံမြေမှ ချစ်တေးတစ်ပုဒ် ဇာတ်ကားသည် သစုန့်ခေတ်နှောင်းပိုင်းကို အခြေတည်ထားပြီး သိမ်းငှက်သူရဲကောင်းမှသည် နဂါးနိုင်ဓားအထိဟာ မွန်ဂိုအုပ်စိုးသည့် ယွမ်ခေတ်နှင့် နဂါးနိုင်ဓားသည် ယွမ်ခေတ်နှောင်းပိုင်း မင်ခေတ်အစ မင်မင်းဆက်ကို တည်ထောင်သူ ကျူးယွင်ကျန်း၏ ဘဝဖြစ်စဉ် အနည်းအကျဉ်းကို ထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် တကယ်ဖြစ်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်၏ 10% ခန့် ပါဝင်နေသည်ဟု ကောက်ချက်ချလို့ ရပေသည်။
ယခုရေးမည့် အကြောင်းအရာများသည် စိတ်ကူးယဉ် ရေးသားချက်များသာ ဖြစ်သည့်အတွက် မှတ်စုကြမ်းမှ သိုင်းလောကကို ကြိုက်နှစ်သက်သည့် သူများ အမှားအယွင်းပါလျှင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ ကြိုတင်တောင်းပန်ထားပါရစေ။ မကြ်ိုက်သည့် သူများလည်း ဆဲဆ်ိုခြင်းမပြုပဲ ကျော်သွားပေးပြီး အခြားလူများ တင်ထားသော Post များကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် အားပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ ကျွန်တော် သဘောကျနှစ်သက်ဆုံး ဖြစ်တဲ့
တုကူးဓားသိုင်း ၉ ကွက် 獨孤求敗 Dúgū Qiúbaì
"စိတ်ကူးထက် လက်က အရင်ဦးရမယ်။ တိုက်ကွက်မရှိခြင်းဖြင့် တိုက်ကွက်ရှိသူကို အနိုင်ယူပါ။"
တုကူးဓားသိုင်း ၉ ကွက်ကို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ခဲ့သူကတော့ ဟောင်ကောင်က သိုင်းဝတ္ထုများ ရေးသားသူ စာရေးဆရာကြီး ကျင့်ရုံ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာကြီးကို ဓားမိစ္ဆာဟု နာမည်ပြောင် ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး သူရေးခဲ့တဲ့ သိုင်းဝတ္ထုများဟာ ဓားသိုင်းပညာကို အခြေခံပြီး ရေးသားတာ များပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သိုင်းဝတ္ထု အများစုမှာ ဒီစကားတခွန်းကို အမြဲလိုလို တွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။
"ဓားသမားတစ်ယောက်ဟာ ဓားက်ို မရှိသလို သဘောထားရမယ်။"
သဘောကတော့ ဓားသမားတစ်ယောက်ဟာ ဓားကိုင်ထားပေမယ့် သိုင်းကွက်ထုတ်တဲ့အခါ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟာ ဓားမပါသလို လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားပြီး ဓားနဲ့ လူ တသားတည်း ဖြစ်နေစေရမယ်လို့ ဆိုလ်ိုတာပါ။ ဒီသဘောတရားဟာ တရုတ်သိုင်းကားထဲက ဓားသမားတွေရဲ့ ပြောနေကျ စကားတခွန်းပါပဲ။
တုကူးဓားသိုင်းမှာ ဓားသိုင်း ၉ ကွက်ကို ပုံမှန်ဓားနဲ့ ဓားကြီးသိုင်းကွက်ဆိုပြီး ၂ မျိူးခွဲခြားလို့ ရပါတယ်။ သိုင်းလောကစိန်ခေါ်သံထဲမှာ လွင်ကူချူံး (လင့်ဟူချူံး) သုံးသွားတာကတော့ တုကူးချိူးကျန့် ဓားပေါ့သိုင်းကွက် ဖြစ်ပြီး သိမ်းငှက်သူရဲကောင်းထဲမှာ ရန်ကော် အသုံးပြုသွားတာကတော့ တုကူးကျိူကျန့် တုကူးဧကရာဇ်ဓား ၉ ကွက် ဓားကြီးသိုင်းကွက် ဖြစ်ပါတယ်။ တုကူး 獨孤 Dúgū ဆိုတာကတော့ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်သူကို
ပြောတာဖြစ်ပြီး 求敗 Qiúbaì ချိူးပိုင့်ကတော့ အရှုံးကို ရှာဖွေခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ အားလုံးပေါင်းရင် အရှုံးကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ အထီးကျန်နေသူလို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ တုကူးဓားသိုင်းကို 劍魔 ကျန့်မော်ဆိုသူ ဓားဘုရင်တစ်ဦးက တီထွင်ခဲ့ပြီး သူဟာ သိုင်းလောကမှာရှိတဲ့ အကျော်အမော်တိုင်းကို ရှာဖွေပြီး သိုင်းပညာဖလှယ်ခဲ့သော်လည်း သူနှင့် လက်ရည်တူ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့်သူများ မရှိခဲ့ပေ။ စာရေးသူသည် ကျင့်မော်ဆရာထံမှ ဖုန်းချင်းရန် မည်ကဲ့သို့ ဓားသိုင်းပညာကို ဆက်ခံခဲ့သည်ကို မရေးထားပေ။
လွင်ကူးချူံးကို ဖုန်းချင်းရန်က ပညာမွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့ပြီး တုကူးဓားသိုင်း ၉ ကွက်ကို သင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တုကူးဓားသိုင်းဟာ အရှုံးကို လိုက်ရှာပေမယ့် မတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ရန်ကော်သင်ယူခဲ့တဲ့ ဓားကြီးကွက်ကတော့ အတွင်းအားနဲ့ တွဲသုံးပြီးမှ တိုက်ခိုက်ရတဲ့ သိုင်းပညာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓားကြီးသိုင်းမှာတော့ ဓားသိုင်းရဲ့ လွှဲချက် ရွေ့ကွက်တွေဟာ အတွင်းအားပေါ် မူတည်ပြီး အကျိူးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ဓားကွက်တိုင်းဟာ ဓားသွားမှာ သက်ရောက်မှုရှိပြီး တိုက်ခိုက်စဉ်အတွင်းမှာ အတွင်းအားဟာ ဓားအတွင်းထိ စီးဝင်ရောက်တဲ့အတွက် ရန်ကော်ဟာ သာမန်ဓားနဲ့ ကျင့်နေစဉ်မှာ ဓားတွေ ခနခနကျိူးကုန်တာ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဓားရဲ့ အလေးချိန်နဲ့ အတွင်းအားဟာ သိုင်းကွက်ထုတ်သူရဲ့ လွှဲရမ်းချက် ထိုးခုတ်ချက်တွေရဲ့ အားသက်ရောက်မှုကို တိုးမြင့်ပေးပါတယ်။
တုကူးဓားသိုင်း ၉ ကွက်ဟာ ဓားရဲ့ဦးတည်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားစေပြီး ဓားချက်တိုင်းဟာ မည်သည့်လက်နက်မျိူးကိုမဆို ခုခံတားဆီးပြီး တန်ပြန်တိုက်စစ် ဆင်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဓားသိုင်းရဲ့ အဓိကအချက်ဟာ လျှင်မြန်မှုဖြစ်ပြီး တဖက်သားရဲ့ သိုင်းကွက်အမှားကို တိုက်ခိုက်နေစဉ် ရှာဖွေပြီး အားနည်းချက်ကို လျှင်မြန်စွာ တိုက်ခိုက်တတ်ရပါမယ်။ နောက်တချက်ကတော့ သိုင်းကွက်ကို မထုတ်ပဲ အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲတိုက်ခိုက်တတ်ရပါမယ်။ သိုင်းပညာအများစုဟာ သိုင်းကွက်ထုတ်တာနဲ့ ဘာသိုင်းကွက်လဲဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ပေမယ့်။ တုကူးဓားသိုင်းကတော့ သိုင်းကွက်မရှိတာကိုက သိုင်းကွက်ပဲဆိုတဲ့ သဘာဝ သဘောတရားကို အခြေခံထားပါတယ်။ ဒီအချက် ၂ ချက်ကို သိုင်းသမားဟာ အမြဲမှတ်သားထားရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် အဆုံးမရှိတဲ့ သိုင်းကွက်တွေနဲ့ တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်း ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ တုကူးဓားသိုင်း ၉ ကွက်ဟာ အတွင်းအားထက် သိုင်းကွက်ကို အသားပေးထားတဲ့ အတွက် အတွင်းအားမရှိလည်း ရသလို အတွင်းအား ရှိရင်တော့ ပိုမို ပြီးပြည့်စုံလာပါလိမ့်မယ်။ သိုင်းကွက် တစ်ခုချင်းစီမှာ လက်နက်အမျိူးအစားအလိုက် အသုံးပြုရသည့် သိုင်းကွက်များ ပါဝင်ပြီး ၉ ကွက်ဟု ဆိုသော်လည်း ပြန်လည်ခွဲခြားသည့်အခါ သိုင်းကွက် ၁ ကွက်လျှင် သိုင်းကွက်ခွဲပေါင်း ရာကျော်သည်အထိ ရှိနေတတ်သည်။
တုကူးဓားသိုင်း ၉ ကွက်
၁ အထွေထွေတိုက်ကွက်ဟာ သိုင်းလောကရဲ့ လက်နက်အတော်များများရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခုခံရာမှာ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။
၂ ဓားနှစ်ချက်ဖြင့် ခုတ်ခွဲခြင်းဟာ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ရာတွင် အသုံးပြုပါတယ်။
၃ အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းဟာ ရန်သူကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ရာတွင် သစ်ရွက်ကို ဖြတ်သကဲ့သို့ ရန်သူ့နောက်ကျော်ကနေ ထိုးခုတ်လို့ရတဲ့ သိုင်းကွက်ဖြစ်ပြီး လွင်ကူးချူံး အသုံးအများဆုံး မိုးပေါ်ကို ခုန်တက်ပြီးမှ ဓားဖြင့် ထိုးဆင်းကျလာသည့် သိုင်းကွက်ဟာ အမှတ် ၃ အကွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ ရန်သူအတော်များများဟာ ၃ ကွက်ထဲနဲ့တင် ရှုံးနိမ့်ကုန်ကြတာ များပါတယ်။
၄ လှံက်ို တိုက်ခိုက်သည့် သိုင်းကွက်
၅ ကြာပွတ်ကို တိုက်ခိုက်သည့် သိုင်းကွက်
၆ တင်းပုတ်ကို တိုက်သည့် သိုင်းကွက် တို့ဟာ သက်ဆိုင်သည့် လက်နက်အသီးသီးဖြင့် တိုက်ခိုက်လာပါက ခုခံကာကွယ်ရာတွင်၎င်း တန်ပြန်တိုက်စစ်ဆင်ရာတွင်၎င်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
၇ ပင်စည်ကို ပိုင်းဖြတ်ခြင်းသိုင်းကွက်ဟာ လက်သိုင်းကွက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်လာသူများကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် သိုင်းကွက်ဖြစ်သည်။
၈ မြားတို့ကို ချေဖျက်ခြင်းသိုင်းကွက်သည် တဖက်မှ မြား သို့မဟုတ် လက်နက်ငယ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်လာပါက ဓားကွက်ဖြင့် ခုခံခြင်းနှင့် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို တပြိုက်နက်တည်း အသုံးပြုကာ ပစ်လွှတ်လိုက်သော လက်နက်ကို ရန်သူ့ဆီကို ပြန်သွားစေရန် သိုင်းကွက်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
၉ အတွင်းအားချေဖျက် သိုင်းကွက်ဟာ အတွင်းအားမြင့်မားသူတို့၏ အတွင်းအားကို ခုခံကာကွယ်ရင်း တန်ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်သည်ဟု ဆိုထားသော်လည်း အသေးစိတ်တော့ ရေးသားခြင်း မရှိချေ။ သို့သော် လွင်ကူးချူံးနှင့် ရှောင်လင် လက်ထောက်ဆရာတော်တို့ တိုက်ခိုက်သည့်အခါ အဆိုပါ သိုင်းကွက်ကို ထုတ်သုံးသည်ကို
ရန်ကော်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဓားသိုင်းကွက်ကတော့ ဓားကြီးသိုင်းကွက်ဖြစ်ပြီး အတွင်းအားအပေါ် အခြေခံထားပေမယ့် သဘောတရားချင်းကော သိုင်းကွက်ချင်းပါ တူညီပါတယ်။ ရန်ကော်ဟာ သိမ်းငှက်ရဲ့ လမ်းပြမှုနဲ့ တုကူးအုတ်ဂူကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့အုတ်ဂူမှာ ရေးထိုးထားတာကတော့
"ကျွန်တော်ဟာ သိုင်းလောကမှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက် ကျင်လည်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်ရဲ့ ရန်သူတွေနဲ့ သိုင်းလောကအကျော်အမော်တွေကို အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ တမိုးအောက်မြေပြင်မှာ ကျွန်ုပ်နှင့် လက်ရည်တူယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်သူကို မတွေ့ရသည့် အတွက် သိုင်းလောကမှ စွန့်ခွာပြီး တောင်ကြားထဲမှာ
နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘဝတလျှောက်လုံး သိုင်းပြိုင်ပွဲများကိုသာ ရှာဖွေခဲ့သော်လည်း အချည်းအနှီးပါပဲ။ မခံစားနိုင်သော အထီးကျန်နေခြင်းဟာ ကျွန်တော့ရဲ့ ကံတရားပါပဲ။"
ထို့နောက် ဓားမိစ္ဆာ တုကူးချိူးပိုင့်ဟာ "ကျွန်ုပ်ကို အရိုအသေပြုသူဟာ မြှုပ်နှံထားသော ဓားတို့၏ အရှင်သခင်သစ် ဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။"
ပထမဓား (ဂူထဲတွင် ရှိနေသေးသည်)
ငါ၏ ပထမဓားသည် မည်သူမျှ တားဆီးလို့ မရလောက်အောင် လွန်စွာမှ ချွန်ထက်လှပြီး ခိုင်ခံသန်မာသော ဓားဖြစ်သည်။ အဆ်ိုပါဓားကို ကိုင်ဆောင်ပြီး ငါသည် ဆယ်ကျော်အရွယ်တွင် မြောက်ပိုင်းမြေပြန့်ဒေသရှိ သူရဲကောင်းတို့အား စိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်ကာ အနိုင်ယူခဲ့ပေသည်။
ဒုတိယဓား (အဆိုပါဓားကို စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီး/သစ်သားဓားကို အစားထိုးထားရှိသည်)
ငါ၏ ဒုတိယဓားသည် ခရမ်းရောင်ရှိပြီး ဓား၏ လှုပ်ရှားမှုသည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ ငါ့အသက် ၂၀ ကျော်မှာ အသုံးပြုခဲ့တယ်။ ငါဟာ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူ တစ်ဦးကို မှားယွင်းစွာ သတ်မိခဲ့ပြီး နောင်တကြီးစွာ ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ထပ် မှားယွင်းသော ဆုံးရှုံးမှု ထပ်မစေရန် နက်ရှိုင်းလှသော ချောက်ကမ်းတစ်ခုတွင် မြှုပ်နှံခဲ့ပေသည်။
တတိယဓား (ဂူထဲတွင် ရှိသေးသည်။)
ငါ၏ တတိယဓားကို လေးလံသော သံတုံးဖြင့် ထုလုပ်ခဲ့ပေသည်။ အဆိုပါဓားသည် အသုံးပြုပေါ် မူတည်၍ ရိုးရှင်းမှုအပေါ် အခြေခံထားသည့်အတွက် လိမ္မာပါးနပ်စွာ အသုံးပြုတတ်လျှင် မိုးအောက်မြေပြင်တွင် ပြိုင်ဘက်ကင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ငါ၏ အသက် ၃၀ အရွယ်တွင် သုံးစွဲခဲ့ပေသည်။
ငါ့အသက် ၄၀ အရွယ်ကို ရောက်လာခဲ့အခါမှာ ငါဟာ ဘယ်လက်နက်ကိုမဆို အခက်အခဲမရှိ အသုံးပြုလာနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး မြက်ပင် သစ်သား ဝါးနဲ့ ကျောက်တုံးကိုပင် လက်နက်အဖြစ် အသုံးပြုလာနိုင်သည်။ အဲ့နောက်မှာ ငါ့စွမ်းရည်ဟာ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ငါ့ကို ဘယ်လက်နက်ကမှ ထိခိုက်အောင် မလုပ်နိုင်တော့ပဲ တိုက်ပွဲတိုင်းတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့ပေတော့သည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဇာတ်ကားထဲကနှင့် အနည်းငယ် ကွဲလွဲမှု ရှိနိုင်သည်။ cmt တွင် ဆဲဆိုသော စကားလုံးများ ပါခဲ့ပါက Bann ပါမည်။
အပျော်သဘောနဲ့ပေါ့ဗျာ။ တရုတ်ပြည်မှာလည်း ဒီအကြောင်းကို မေးကြည့်ကြပါတယ်။ တကယ်လို့ ရန်ကော်နဲ့ လွင်ကူချူံးတို့ ချကြရင် ဘယ်သူနိုင်မယ် ထင်သလဲတဲ့။ ဒါကတော့ ဗဟုသုတနဲ့ ဆိုင်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် သိုင်းလောကသားတွေ သိုင်းပညာတွေ ပြန်လေ့လာပြီး ဖြေကြည့်ကြလေ။
ရန်ကော် YG လွင်ကူချူံး LHC အတိုကောက် အမှတ်အသား။
တရုတျသိုငျးဇာတျကားမြားထဲမှ အထငျကရရှိသညျ့ သိုငျးပညာမြား။
ကြှနျတျောတို့ ငယျစဉျတုနျး တရုတျသိုငျးဇာတျလမျးတှဲမြားကို နှဈခြိူကျစှာ ကွညျ့ရှုအားပေးခဲ့ဖူးရငျ ခငျဗြားတို့ရဲ့ အသကျဟာ ၂၀ ကြျောနပွေီလို့ ရဲရဲကွီး အာမခံတယျ။
ထိုဇာတျလမျးတှဲမြားထဲတှငျ ပါဝငျသော သိုငျးပညာရပျမြားမှာ သိုငျးဝတ်တုရေးသားသူတို့ စိတျကူးယဉျပွီး ရေးသားထားသညျမှာ မှနျသျောလညျး အမြားစုမှ အပွငျမှာလကျတှရှေိ့နသေညျ့ သိုငျးပညာ၏ 20% ကို မှီငွမျးထားသညျကို တှရေ့သလို တခြိူ့မှာ အပွငျမှာ တကယျ ရှိနသေညျ့ သိုငျးပညာရပျမြားပါ ထညျ့သှငျးထားသညျ။ ကနျြရဈခဲ့သညျ့ သိုငျးပညာရပျမြား၏ သမိုငျးကွောငျးနှငျ့ မူလအစ နာမညျမြားကိုလညျး ရံဖနျရံခါ အသုံးခလြရှေိ့သညျ။
သိုငျးလောက၏ နောကျခံကို သစုနျ့ခတျေ၌သာ Base တညျထားသညျက မြားသညျ။ ထိုသစုနျ့ခတျေ၌ တရုတျပွညျသညျ တိုငျးတပါးတို့၏ ရနျကို ကွောကျရှံ့ရသဖွငျ့ လူတိုငျးလိုလို ကိုယျ့ကိုကိုယျ ကာကှယျရနျနှငျ့ တိုငျးပွညျကို ကာကှယျရနျအတှကျ သိုငျးပညာကို သငျကွားလေ့ ရှိကွသညျ့ ခတျေကာလ ဖွဈသဖွငျ့ သိုငျးဝတ်ထုမြားကို အခွတေညျလို့ ကောငျးသညျ။ မကျမုံမွမှေ ခဈြတေးတဈပုဒျ ဇာတျကားသညျ သစုနျ့ခတျေနှောငျးပိုငျးကို အခွတေညျထားပွီး သိမျးငှကျသူရဲကောငျးမှသညျ နဂါးနိုငျဓားအထိဟာ မှနျဂိုအုပျစိုးသညျ့ ယှမျခတျေနှငျ့ နဂါးနိုငျဓားသညျ ယှမျခတျေနှောငျးပိုငျး မငျခတျေအစ မငျမငျးဆကျကို တညျထောငျသူ ကြူးယှငျကနျြး၏ ဘဝဖွဈစဉျ အနညျးအကဉျြးကို ထညျ့သှငျးထားသညျ့အတှကျ တကယျဖွဈခဲ့သညျ့ ဖွဈရပျ၏ 10% ခနျ့ ပါဝငျနသေညျဟု ကောကျခကျြခလြို့ ရပသေညျ။
ယခုရေးမညျ့ အကွောငျးအရာမြားသညျ စိတျကူးယဉျ ရေးသားခကျြမြားသာ ဖွဈသညျ့အတှကျ မှတျစုကွမျးမှ သိုငျးလောကကို ကွိုကျနှဈသကျသညျ့ သူမြား အမှားအယှငျးပါလြှငျ ခှငျ့လှတျပေးပါလို့ ကွိုတငျတောငျးပနျထားပါရစေ။ မွကိုကျသညျ့ သူမြားလညျး ဆဲဆိုခွငျးမပွုပဲ ကြျောသှားပေးပွီး အခွားလူမြား တငျထားသော Post မြားကို ဖတျရှုခွငျးဖွငျ့ အားပေးကွပါလို့ ပွောခငျြပါတယျ။
ပထမဦးစှာ ကြှနျတျော သဘောကနြှဈသကျဆုံး ဖွဈတဲ့
တုကူးဓားသိုငျး ၉ ကှကျ 獨孤求敗 Dúgū Qiúbaì
"စိတျကူးထကျ လကျက အရငျဦးရမယျ။ တိုကျကှကျမရှိခွငျးဖွငျ့ တိုကျကှကျရှိသူကို အနိုငျယူပါ။"
တုကူးဓားသိုငျး ၉ ကှကျကို ဇာတျအိမျဖှဲ့ခဲ့သူကတော့ ဟောငျကောငျက သိုငျးဝတ်ထုမြား ရေးသားသူ စာရေးဆရာကွီး ကငျြ့ရုံ ရေးသားခဲ့ပါတယျ။ စာရေးဆရာကွီးကို ဓားမိစ်ဆာဟု နာမညျပွောငျ ချေါဝျေါကွပွီး သူရေးခဲ့တဲ့ သိုငျးဝတ်ထုမြားဟာ ဓားသိုငျးပညာကို အခွခေံပွီး ရေးသားတာ မြားပါတယျ။ သူ့ရဲ့ သိုငျးဝတ်ထု အမြားစုမှာ ဒီစကားတခှနျးကို အမွဲလိုလို တှရေ့လေ့ ရှိပါတယျ။
"ဓားသမားတဈယောကျဟာ ဓားကို မရှိသလို သဘောထားရမယျ။"
သဘောကတော့ ဓားသမားတဈယောကျဟာ ဓားကိုငျထားပမေယျ့ သိုငျးကှကျထုတျတဲ့အခါ လှုပျရှားမှုတိုငျးဟာ ဓားမပါသလို လှတျလပျစှာ လှုပျရှားပွီး ဓားနဲ့ လူ တသားတညျး ဖွဈနစေရေမယျလို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒီသဘောတရားဟာ တရုတျသိုငျးကားထဲက ဓားသမားတှရေဲ့ ပွောနကြေ စကားတခှနျးပါပဲ။
တုကူးဓားသိုငျးမှာ ဓားသိုငျး ၉ ကှကျကို ပုံမှနျဓားနဲ့ ဓားကွီးသိုငျးကှကျဆိုပွီး ၂ မြိူးခှဲခွားလို့ ရပါတယျ။ သိုငျးလောကစိနျချေါသံထဲမှာ လှငျကူခြူံး (လငျ့ဟူခြူံး) သုံးသှားတာကတော့ တုကူးခြိူးကနျြ့ ဓားပေါ့သိုငျးကှကျ ဖွဈပွီး သိမျးငှကျသူရဲကောငျးထဲမှာ ရနျကျော အသုံးပွုသှားတာကတော့ တုကူးကြိူကနျြ့ တုကူးဧကရာဇျဓား ၉ ကှကျ ဓားကွီးသိုငျးကှကျ ဖွဈပါတယျ။ တုကူး 獨孤 Dúgū ဆိုတာကတော့ တဈယောကျတညျး အထီးကနျြသူကို
ပွောတာဖွဈပွီး 求敗 Qiúbaì ခြိူးပိုငျ့ကတော့ အရှုံးကို ရှာဖှခွေငျးလို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။ အားလုံးပေါငျးရငျ အရှုံးကိုရှာဖှရေငျးနဲ့ အထီးကနျြနသေူလို့ အဓိပ်ပါယျ ရပါတယျ။ တုကူးဓားသိုငျးကို 劍魔 ကနျြ့မျောဆိုသူ ဓားဘုရငျတဈဦးက တီထှငျခဲ့ပွီး သူဟာ သိုငျးလောကမှာရှိတဲ့ အကြျောအမျောတိုငျးကို ရှာဖှပွေီး သိုငျးပညာဖလှယျခဲ့သျောလညျး သူနှငျ့ လကျရညျတူ ယှဉျပွိုငျနိုငျမညျ့သူမြား မရှိခဲ့ပေ။ စာရေးသူသညျ ကငျြ့မျောဆရာထံမှ ဖုနျးခငျြးရနျ မညျကဲ့သို့ ဓားသိုငျးပညာကို ဆကျခံခဲ့သညျကို မရေးထားပေ။
လှငျကူးခြူံးကို ဖုနျးခငျြးရနျက ပညာမှကေို လကျဆငျ့ကမျးပေးခဲ့ပွီး တုကူးဓားသိုငျး ၉ ကှကျကို သငျပေးခဲ့ပါတယျ။ တုကူးဓားသိုငျးဟာ အရှုံးကို လိုကျရှာပမေယျ့ မတှခေဲ့ရဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
ရနျကျောသငျယူခဲ့တဲ့ ဓားကွီးကှကျကတော့ အတှငျးအားနဲ့ တှဲသုံးပွီးမှ တိုကျခိုကျရတဲ့ သိုငျးပညာ ဖွဈပါတယျ။ ဓားကွီးသိုငျးမှာတော့ ဓားသိုငျးရဲ့ လှဲခကျြ ရှကှေ့ကျတှဟော အတှငျးအားပျေါ မူတညျပွီး အကြိူးသကျရောကျမှု ရှိပါတယျ။ ဓားကှကျတိုငျးဟာ ဓားသှားမှာ သကျရောကျမှုရှိပွီး တိုကျခိုကျစဉျအတှငျးမှာ အတှငျးအားဟာ ဓားအတှငျးထိ စီးဝငျရောကျတဲ့အတှကျ ရနျကျောဟာ သာမနျဓားနဲ့ ကငျြ့နစေဉျမှာ ဓားတှေ ခနခနကြိူးကုနျတာ ကွုံခဲ့ရပါတယျ။ ဓားရဲ့ အလေးခြိနျနဲ့ အတှငျးအားဟာ သိုငျးကှကျထုတျသူရဲ့ လှဲရမျးခကျြ ထိုးခုတျခကျြတှရေဲ့ အားသကျရောကျမှုကို တိုးမွငျ့ပေးပါတယျ။
တုကူးဓားသိုငျး ၉ ကှကျဟာ ဓားရဲ့ဦးတညျခကျြကို လှတျလပျစှာ လှုပျရှားစပွေီး ဓားခကျြတိုငျးဟာ မညျသညျ့လကျနကျမြိူးကိုမဆို ခုခံတားဆီးပွီး တနျပွနျတိုကျစဈ ဆငျနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။ ဓားသိုငျးရဲ့ အဓိကအခကျြဟာ လြှငျမွနျမှုဖွဈပွီး တဖကျသားရဲ့ သိုငျးကှကျအမှားကို တိုကျခိုကျနစေဉျ ရှာဖှပွေီး အားနညျးခကျြကို လြှငျမွနျစှာ တိုကျခိုကျတတျရပါမယျ။ နောကျတခကျြကတော့ သိုငျးကှကျကို မထုတျပဲ အလိုကျသငျ့ ပွောငျးလဲတိုကျခိုကျတတျရပါမယျ။ သိုငျးပညာအမြားစုဟာ သိုငျးကှကျထုတျတာနဲ့ ဘာသိုငျးကှကျလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးနိုငျပမေယျ့။ တုကူးဓားသိုငျးကတော့ သိုငျးကှကျမရှိတာကိုက သိုငျးကှကျပဲဆိုတဲ့ သဘာဝ သဘောတရားကို အခွခေံထားပါတယျ။ ဒီအခကျြ ၂ ခကျြကို သိုငျးသမားဟာ အမွဲမှတျသားထားရပါမယျ။ ဒါဆိုရငျ အဆုံးမရှိတဲ့ သိုငျးကှကျတှနေဲ့ တိုကျခိုကျနိုငျစှမျး ရှိလာပါလိမျ့မယျ။ တုကူးဓားသိုငျး ၉ ကှကျဟာ အတှငျးအားထကျ သိုငျးကှကျကို အသားပေးထားတဲ့ အတှကျ အတှငျးအားမရှိလညျး ရသလို အတှငျးအား ရှိရငျတော့ ပိုမို ပွီးပွညျ့စုံလာပါလိမျ့မယျ။ သိုငျးကှကျ တဈခုခငျြးစီမှာ လကျနကျအမြိူးအစားအလိုကျ အသုံးပွုရသညျ့ သိုငျးကှကျမြား ပါဝငျပွီး ၉ ကှကျဟု ဆိုသျောလညျး ပွနျလညျခှဲခွားသညျ့အခါ သိုငျးကှကျ ၁ ကှကျလြှငျ သိုငျးကှကျခှဲပေါငျး ရာကြျောသညျအထိ ရှိနတေတျသညျ။
တုကူးဓားသိုငျး ၉ ကှကျ ၁ အထှထှေတေိုကျကှကျဟာ သိုငျးလောကရဲ့ လကျနကျအတျောမြားမြားရဲ့ တိုကျခိုကျမှုကို ခုခံရာမှာ အသုံးပွုလို့ ရပါတယျ။
၂ ဓားနှဈခကျြဖွငျ့ ခုတျခှဲခွငျးဟာ တနျပွနျတိုကျခိုကျရာတှငျ အသုံးပွုပါတယျ။
၃ အဆကျမပွတျတိုကျခိုကျခွငျးဟာ ရနျသူကို တနျပွနျတိုကျခိုကျရာတှငျ သဈရှကျကို ဖွတျသကဲ့သို့ ရနျသူ့နောကျကြျောကနေ ထိုးခုတျလို့ရတဲ့ သိုငျးကှကျဖွဈပွီး လှငျကူးခြူံး အသုံးအမြားဆုံး မိုးပျေါကို ခုနျတကျပွီးမှ ဓားဖွငျ့ ထိုးဆငျးကလြာသညျ့ သိုငျးကှကျဟာ အမှတျ ၃ အကှကျ ဖွဈပါတယျ။ သူရဲ့ ရနျသူအတျောမြားမြားဟာ ၃ ကှကျထဲနဲ့တငျ ရှုံးနိမျ့ကုနျကွတာ မြားပါတယျ။
၄ လှံကို တိုကျခိုကျသညျ့ သိုငျးကှကျ
၅ ကွာပှတျကို တိုကျခိုကျသညျ့ သိုငျးကှကျ
၆ တငျးပုတျကို တိုကျသညျ့ သိုငျးကှကျ တို့ဟာ သကျဆိုငျသညျ့ လကျနကျအသီးသီးဖွငျ့ တိုကျခိုကျလာပါက ခုခံကာကှယျရာတှငျ၎င်းငျး တနျပွနျတိုကျစဈဆငျရာတှငျ၎င်းငျး အသုံးပွုနိုငျသညျ။
၇ ပငျစညျကို ပိုငျးဖွတျခွငျးသိုငျးကှကျဟာ လကျသိုငျးကှကျဖွငျ့ တိုကျခိုကျလာသူမြားကို တိုကျခိုကျရာတှငျ အသုံးပွုသညျ့ သိုငျးကှကျဖွဈသညျ။
၈ မွားတို့ကို ခဖြေကျြခွငျးသိုငျးကှကျသညျ တဖကျမှ မွား သို့မဟုတျ လကျနကျငယျဖွငျ့ တိုကျခိုကျလာပါက ဓားကှကျဖွငျ့ ခုခံခွငျးနှငျ့ တနျပွနျတိုကျခိုကျခွငျးကို တပွိုကျနကျတညျး အသုံးပွုကာ ပဈလှတျလိုကျသော လကျနကျကို ရနျသူ့ဆီကို ပွနျသှားစရေနျ သိုငျးကှကျကို အသုံးပွုနိုငျသညျ။
၉ အတှငျးအားခဖြေကျြ သိုငျးကှကျဟာ အတှငျးအားမွငျ့မားသူတို့၏ အတှငျးအားကို ခုခံကာကှယျရငျး တနျပွနျတိုကျခိုကျနိုငျသညျဟု ဆိုထားသျောလညျး အသေးစိတျတော့ ရေးသားခွငျး မရှိခြေ။ သို့သျော လှငျကူးခြူံးနှငျ့ ရှောငျလငျ လကျထောကျဆရာတျောတို့ တိုကျခိုကျသညျ့အခါ အဆိုပါ သိုငျးကှကျကို ထုတျသုံးသညျကို
ရနျကျောအသုံးပွုခဲ့တဲ့ ဓားသိုငျးကှကျကတော့ ဓားကွီးသိုငျးကှကျဖွဈပွီး အတှငျးအားအပျေါ အခွခေံထားပမေယျ့ သဘောတရားခငျြးကော သိုငျးကှကျခငျြးပါ တူညီပါတယျ။ ရနျကျောဟာ သိမျးငှကျရဲ့ လမျးပွမှုနဲ့ တုကူးအုတျဂူကို တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ သူ့အုတျဂူမှာ ရေးထိုးထားတာကတော့
"ကြှနျတျောဟာ သိုငျးလောကမှာ နှဈပေါငျး ၃၀ လောကျ ကငျြလညျခဲ့ဖူးသူဖွဈပွီး ကြှနျုပျရဲ့ ရနျသူတှနေဲ့ သိုငျးလောကအကြျောအမျောတှကေို အနိုငျယူခဲ့ပါတယျ။ တမိုးအောကျမွပွေငျမှာ ကြှနျုပျနှငျ့ လကျရညျတူယှဉျပွိုငျနိုငျသညျ့သူကို မတှရေ့သညျ့ အတှကျ သိုငျးလောကမှ စှနျ့ခှာပွီး တောငျကွားထဲမှာ
နထေိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ ဘဝတလြှောကျလုံး သိုငျးပွိုငျပှဲမြားကိုသာ ရှာဖှခေဲ့သျောလညျး အခညျြးအနှီးပါပဲ။ မခံစားနိုငျသော အထီးကနျြနခွေငျးဟာ ကြှနျတော့ရဲ့ ကံတရားပါပဲ။"
ထို့နောကျ ဓားမိစ်ဆာ တုကူးခြိူးပိုငျ့ဟာ "ကြှနျုပျကို အရိုအသပွေုသူဟာ မွှုပျနှံထားသော ဓားတို့၏ အရှငျသခငျသဈ ဖွဈလာပလေိမျ့မညျ။"
ပထမဓား (ဂူထဲတှငျ ရှိနသေေးသညျ)
ငါ၏ ပထမဓားသညျ မညျသူမြှ တားဆီးလို့ မရလောကျအောငျ လှနျစှာမှ ခြှနျထကျလှပွီး ခိုငျခံသနျမာသော ဓားဖွဈသညျ။ အဆိုပါဓားကို ကိုငျဆောငျပွီး ငါသညျ ဆယျကြျောအရှယျတှငျ မွောကျပိုငျးမွပွေနျ့ဒသေရှိ သူရဲကောငျးတို့အား စိနျချေါတိုကျခိုကျကာ အနိုငျယူခဲ့ပသေညျ။
ဒုတိယဓား (အဆိုပါဓားကို စှနျ့ပဈခဲ့ပွီး/သဈသားဓားကို အစားထိုးထားရှိသညျ)
ငါ၏ ဒုတိယဓားသညျ ခရမျးရောငျရှိပွီး ဓား၏ လှုပျရှားမှုသညျ ပွောငျးလှယျပွငျလှယျရှိသညျ။ ငါ့အသကျ ၂၀ ကြျောမှာ အသုံးပွုခဲ့တယျ။ ငါဟာ ရိုးသားဖွောငျ့မတျသူ တဈဦးကို မှားယှငျးစှာ သတျမိခဲ့ပွီး နောငျတကွီးစှာ ရရှိခဲ့သညျ။ နောကျထပျ မှားယှငျးသော ဆုံးရှုံးမှု ထပျမစရေနျ နကျရှိုငျးလှသော ခြောကျကမျးတဈခုတှငျ မွှုပျနှံခဲ့ပသေညျ။
တတိယဓား (ဂူထဲတှငျ ရှိသေးသညျ။)
ငါ၏ တတိယဓားကို လေးလံသော သံတုံးဖွငျ့ ထုလုပျခဲ့ပသေညျ။ အဆိုပါဓားသညျ အသုံးပွုပျေါ မူတညျ၍ ရိုးရှငျးမှုအပျေါ အခွခေံထားသညျ့အတှကျ လိမ်မာပါးနပျစှာ အသုံးပွုတတျလြှငျ မိုးအောကျမွပွေငျတှငျ ပွိုငျဘကျကငျး ဖွဈပလေိမျ့မညျ။ ငါ၏ အသကျ ၃၀ အရှယျတှငျ သုံးစှဲခဲ့ပသေညျ။
ငါ့အသကျ ၄၀ အရှယျကို ရောကျလာခဲ့အခါမှာ ငါဟာ ဘယျလကျနကျကိုမဆို အခကျအခဲမရှိ အသုံးပွုလာနိုငျပွီ ဖွဈသညျ။ နောကျဆုံး မွကျပငျ သဈသား ဝါးနဲ့ ကြောကျတုံးကိုပငျ လကျနကျအဖွဈ အသုံးပွုလာနိုငျသညျ။ အဲ့နောကျမှာ ငါ့စှမျးရညျဟာ တိုးတကျလာသညျနှငျ့အမြှ ငါ့ကို ဘယျလကျနကျကမှ ထိခိုကျအောငျ မလုပျနိုငျတော့ပဲ တိုကျပှဲတိုငျးတှငျ အနိုငျရရှိခဲ့ပတေော့သညျ။
မှတျခကျြ။ ။ ဇာတျကားထဲကနှငျ့ အနညျးငယျ ကှဲလှဲမှု ရှိနိုငျသညျ။ cmt တှငျ ဆဲဆိုသော စကားလုံးမြား ပါခဲ့ပါက Bann ပါမညျ။
အပြျောသဘောနဲ့ပေါ့ဗြာ။ တရုတျပွညျမှာလညျး ဒီအကွောငျးကို မေးကွညျ့ကွပါတယျ။ တကယျလို့ ရနျကျောနဲ့ လှငျကူခြူံးတို့ ခကြွရငျ ဘယျသူနိုငျမယျ ထငျသလဲတဲ့။ ဒါကတော့ ဗဟုသုတနဲ့ ဆိုငျသှားပွီ ဖွဈတဲ့အတှကျ သိုငျးလောကသားတှေ သိုငျးပညာတှေ ပွနျလလေ့ာပွီး ဖွကွေညျ့ကွလေ။
ရနျကျော YG လှငျကူခြူံး LHC အတိုကောကျ အမှတျအသား။
ကျူးကော့လျန့် (ခုံးမင်) 诸葛亮 (孔明) Zhuge Liang (Kong Ming)
12:06 AM C-Knowledge , Chinese
ကျူးကော့လျန့် ခေါ် ခုံးမိန်ဟာ Shu Han ရှုဟန် ပြည်ထောင်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဝန်ကြီးချူ ပ် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၃ ပြည်ထောင်ခေတ်မှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ စစ်သူကြီး တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နာမည်ကျော် Sun Tzu စွန်ဇူး နဲ့တောင် နှိုင်းယှဉ်ခံရတဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ စစ်ပညာရှင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ကျူးကော့လျန့် အကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ မှတ်စုကြမ်းမှ တင်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ Sun Tzu or 孙子 Sun Zi ဟာ နာမည်ကျော် Arts of War ဗျူ ဟာကျမ်းကို ရေးသားသူဖြစ်ပြီး Sun Quan ဟာ သူ့ရဲ့ မျိူးဆက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Sun Quan ဆိုတာ Wu ပြည်ထောင်ကို တည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး ၃ ပြည်ထောင်ခေတ်မှာ ထင်ရှားတဲ့ နယ်စားကြီးဖြစ်ပြီး Zhou Yu ကျိူးယွီတို့လို သူရဲကောင်းတွေ ထွန်းကားခဲ့တဲ့ နယ်တစ်ခုပါ။
ကျူးကော့လျန့်ဟာ ဥာဏ်ပညာ ထက်မြတ်သူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ စစ်ဗျူ ဟာ တီထွင်မှုတွေကြောင့် ရှုပြည်ထောင်ဟာ အတောက်ပဆုံး ပြည်ထောင်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျူးကော့လျန့်ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုကတော့ သူအမြဲဝတ်ဆင်လေ့ ရှိတဲ့ တာအိုဘုန်းကြီးတွေ ဝတ်လေ့ရှိတဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ အဖြူ ရောင် ကြိုးကြာငှက်မွေး ယက်တောင်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျူးကော့လျန့်ကို နာမည်ပြောင် အနေနဲ့ ပုန်းနေသော နဂါးလို့ ပြောဆိုလေ့ ရှိပါတယ်။ တချိူ့ စာအုပ်တွေမှာတော့ ဝပ်နေသော နဂါး/ အိပ်နေသော နဂါး စသည့်ဖြင့် ရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ကျူးကော့လျန့်ကို ၁၈၁ ၌ ရန်သုနယ် စန်းတုန်းစီရင်စုမှာ မွေးဖွားပြီး သူဟာ Tai Shan ထိုက်စန်း ဒုတိယ
အုပ်ချူ ပ်ရေးမှူးရဲ့ ဒုတိယမြောက်သား ဖြစ်ကာ မွေးချင်း အစ်ကို တစ်ယောက်၊ ညီတစ်ယောက်နဲ့ ညီမ တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ ၁၀ နှစ်အရွယ်မှာ မိဘ နှစ်ပါးလုံး မရှိတော့ဘဲ အဝါရောင်သူပုန်တွေကြောင့် တောင်ဘက် လျူ ပြောင်အုပ်ချူ ပ်တဲ့ ကျင်းစီရင်စုနယ် Yuzhang ယွဲ့ကျန်းမြို့က ဦးလေးဖြစ်သူထံသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဦးလေးဖြစ်သူဟာ မကြာခင် မြို့စား ဖြစ်လာတာကြောင့် အေးအေးဆေးဆေး ရှိခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ Han ဘုရင် အစိုးရရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် မြို့စားတွေအချင်းချင်း နယ်မြေလုစစ်ပွဲတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဦးလေးဖြစ်သူလည်း ကွယ်လွန် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ညီငယ်ဖြစ်သူနဲ့ အတူ Jingzhou မြို့ကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၁၇ နှစ်မှာ မြို့ စာသင်ကျောင်းမှာ ပညာစတင် သင်ကြားပြီး အတန်းဖော် အားလုံးထက် ပညာအရာမှာ အသာရကာ အသက် ၂၀ မှာပင် ဆက်လက် သင်စရာ မကျန်တော့အောင် တော်ခဲ့ပါတယ်။ ငြင်းခုန်ခြင်းမှာ ၀ါသနာပါကြတဲ့ အတန်းဖော်တွေနဲ့ ခပ်ကင်းကင်း နေခဲ့တာကြောင့် သူ့မှာ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်း နည်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းများဟာ မင်းနေပြည်တော် အသီးသီး မှာ ရာထူးတွေ ထမ်းဆောင်ကြပေမယ့် Kongming ကတော့ ကျေးလက်မှာပဲ နေထိုင်ပြီး အာဏာ စည်းစိမ်တွေကိုလည်း မမက်မောခဲ့ပါဘူး။
ကျူးကော့လျန့်နဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း ၄ ယောက်ရှိပြီး နောက်ထပ် ရင်းနှီးတဲ့ ပညာရှိ ၃ ယောက်လဲ ရှိပါသေးတယ်။ တစ်နေ့ သူနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ပညာရှိ Huang Chenyan ဟွမ်ချန်ယန့်ဟာ "ငါကြားမိတယ်။ မင်းအတွက် အိမ်ထောင်ဖက်ကို ရှာနေတယ်ဆို။ ငါ့မှာ ရုပ်ဆိုးတဲ့ သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူမဟာ အဝါရောင် မျက်နှာနဲ့ မည်းနက်တဲ့ အသားရည် ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပင်ကိုယ် အရည်အသွေးနဲ့ ဥာဏ်ပညာမှာတော့ မင်းနဲ့ ယှဉ်လို့ရတယ်။" လို့ ပြောတဲ့အခါ ကျူးကော့လျန့်ဟာ သူမကို တွေ့ချင်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဟွမ်ချန်ယန့်ဟာ သူ့သမီးဖြစ်သူ 黄月英 Huang Yue Ying ဟွမ်ယွဲ့ယင်းနဲ့ ကျူးကော့လျန့်ကို တွေ့စေတဲ့အခါမှာ သူဟာ ဟွမ်ယွဲ့ယင်းကို သဘောကျပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
စာကြွင်း ။ ။ သင်တို့ဆိုလျှင်ကော ဘယ်လို မိန်းကလေး/ ယောကျာ်းလေးမျိူးကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ် ရွေးချယ်ကြမလဲ။
လျူ ပေ့ထံ၌ အမှုထမ်းခြင်း
လျူ ပေ့ဟာ လျူ ပြောင်ရဲ့ ကျင်းစီရင်စုနယ်မှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် ခိုလှုံနေရချိန်မှာ သူ့ဆီကို Sima Hui စီးမာဟွေ့ ရောက်လာပြီး လတ်တလော စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ အတိတ်တဘောင် အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဝပ်နေတဲ့ နဂါးနဲ့ မီးငှက်ငယ် တစ်ကောင်ဟာ တချိန်တည်း တနေရာထဲမှာ ထွက်ပေါ်လာတယ် ဆိုတာပဲ။ ဒါဟာ သူနဲ့ သူ့ငယ်ချင်း ဖြစ်သူ Pang Tong ဖန်းတုန် နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ရဲ့ ခစားမှုကို ရရင် တရုတ်ပြည်ကို အုပ်စိုးနိုင်မယ်လို့ ဆိုလ်ိုတာပါ။ (တချိူ့က စီးမာယိလို့လဲ ပြောကြပါတယ်။ စီးမာယိ တစ်ယောက်သာ ကျူးကော့လျန့်ကို ရှုံးနိမ့်စေခဲ့ဖူးပါတယ်။)
မှတ်ချက်။ ။ ၃ ပြည်ထောင်သမိုင်းကို ဖတ်တဲ့အခါမှာ အများဆုံး တွေ့ရတာကတော့ ရှဟုတ် 夏侯 နဲ့ စီးမ 司马 ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ 夏侯 မှာ 夏 ဟာ မျိူးနွယ် နာမည်ဖြစ်ပြီး 侯 ကတော့ မြို့စားရာထူးပါ။ စာလုံး ၂ လုံး ပေါင်းရင်တော့ ရှဟုတ်မျိူးနွယ်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ 司马 စီးမာကတော့ ၃ ပြည်ထောင်ခေတ် အစပိုင်းတွေမှာ ရှေ့တန်း စစ်အကြံပေး သို့မဟုတ် စစ်စခန်းမှာ လိုက်ပါရတဲ့ စစ်ဝန်ကြီး ရာထူး ဖြစ်ပြီး ဟန်ခေတ်နှောင်းပိုင်းနဲ့ ၃ ပြည်ထောင်ခေတ် အစပိုင်းတွေမှာတော့ မျိူးရိုးနာမည်အဖြစ်ပါ သုံးလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ထိုအခါ လျူ ပေ့ရဲ့ မိတ်ဆွေ ရွှယ်ရှုဟာ ကျူးကော့လျန့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အကြံပြု ထောင်ခံခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ လျူ ပေ့က တွေ့ချင်ကြောင်းပြောပြီး ကျူးကော့လျန့်ကို လာရောက်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါ ရွှယ်ရှုက "ခင်ဗျား တွေ့ချင်ရင် သူ့ကို သွားတွေ့မှပဲ ရမယ်။ သူကတော့ ခင်ဗျားကို ဘယ်တော့မှ တွေ့ဆုံဖို့ ဖိတ်ခေါ်မှာ မဟုတ်ဖူး။" ဟု ပြန်ဖြေပါတယ်။ ဒါကြောင့် လျူ ပေ့ဟာ ၃ ကြိမ်ခန့် ကျူးကော့လျန့်ကို သွားရောက်တွေ့ဆုံပေမယ့် လျူ ပေ့ကို စမ်းသပ်တဲ့အနေနဲ့ အတွေ့မခံပဲ နောက်ဆုံးကျမှ လျူ ပေ့ကို တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အေဒီ ၂၀၇ ခုနစ်မှာ ကျူးကော့လျန့်ဟာ လျူ ပေ့ဆီမှာ အမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်။ လျူ ပေ့ဟာလည်း ကျူးကော့လျန့်ရဲ့ ထက်မြတ်တဲ့ အရည်အသွေးကြောင့် လေးစားခဲ့ပြီး ပိုမိုနှီးနှော တိုင်ပင်ခဲ့တာကြောင့် ညီအကို ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ ကွမ်းယီနဲ့ ကျန်းဖေးတို့ရဲ့ ဝန်တိုမှုကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအခါ လျူ ပေ့က "အခုအခါမှ ခုံးမိန်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရတဲ့ ငါဟာ အခုမှ ရေတွေ့တဲ့ ငါးလိုပဲ။ ဒါကြောင့် မင်းတို့ရဲ့ မကျေနပ်တဲ့ အမှုအရာတွေကို မလုပ်ကြဖို့ ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။" ဟု ပြောဆိုမှသာ ကွမ်းယီနဲ့ ကျန်းဖေးဟာ အတွန့်တက်ခြင်း မရှိတော့ပဲ ခုံးမိန်ပြောသမျှကို နာခံလာပါတယ်။
ကျူးကော့လျန့်ဟာ လျူ ပေ့ဆီမှာ အမှုထမ်းပြီး နောက်တစ်နှစ် ခရစ်နှစ် ၂၀၈ မှာ လျူ ပြောင်ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့သား အငယ်ဆုံး လျူ ချူံဟာ ချောင်ချောင်ဆီမှာ လက်နက်ချတဲ့အတွက် ချောင်ချောင်ဟာ တရုတ်ပြည် တောင်ပိုင်းကို စစ်တပ်နဲ့ ချီတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ လျူ ပေ့ နဲ့ သူ့လူတွေဟာ တောင်ဘက် ရှခို 夏口 အရပ်ထိ ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ လျူ ပြောင်ရဲ့သား လျူ ချီနဲ့ ဒုက္ခသည် ၁ သိန်းကျော်လည်း လျူ ပေ့နဲ့ အတူတူ လိုက်ပါခဲ့ပြီး လျူ ပေ့ဆီမှာတော့ စစ်သည် ၁၀၀၀ သာ ရှိပါတယ်။ ထိုအခါ ချန်းပန်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လျူ ပေ့နဲ့ ကျူးကော့လျန့်တို့ဟာ စွန်းချွမ်ရှိတာ တောင်ဘက်ပိုင်းကို ထွက်ပြေးရပါတော့တယ်။ ချန်ပန်းတိုက်ပွဲမှာလည်း ကျူးကော့လျန့်ရဲ့ အစီအမံကောင်းမှုကြောင့် အောင်မြင်စွာ ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် ကမ်းပါးနီတိုက်ပွဲကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လျူ စွန်း မဟာမိတ်တပ်များ အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကမ်းပါးနီတိုက်ပွဲအကြောင်း ဖတ်ရှုရန် Link
ကမ်းပါးနီတိုက်ပွဲမှာ ကျူးကော့လျန့်ဟာ ဝူတပ်ရဲ့ စစ်သူကြီး ကျိူးယွီကို စစ်ဘက် အကြံပေးအနေနဲ့ အကူအညီ ပေးခဲ့ပေမယ့် ကျိူးယွီဟာ သူကြံသမျှ သိနေတဲ့ ကျူးကော့လျန့်ကို မနာလိုတာ တစ်ကြောင်း၊ တကယ်လို့ ချောင်ချောင်ကို နိုင်သွားပါက ဝူတိုင်းပြည်အတွက် ရှေ့ရေးမှာ အတားအဆီး မဖြစ်စေဖို့ တစ်ကြောင်းကြောင့် ကျူးကော့လျန့်ရဲ့ အသက်ကို လုပ်ကြံဖို့ နည်းမျိူး ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
ကမ်းပါးနီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ထင်ရှားတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောရရင် ၁၀ ရက်အတွင်း မြား အချောင်း တစ်သိန်း လုပ်ခိုင်းတာလဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ကျူးကော့လျန့်ကတော့ အချိန်သုံးရက်သာ ယူခဲ့ပြီး ချောင်ချောင်ရဲ့ တပ်တွေကို မြူ တွေကျဆင်းနေချိန်မှာ စစ်သင်္ဘောတွေ ချီလာသလို လှည့်စားကာ မြားတွေ ပစ်ခိုင်းပြီး သင်္ဘောပေါ်က ကောက်ရိုးထုံးမှာ လာစိုက်တဲ့ မြားတစ်သိန်းကျော်ကို ကျိူးယွီ ဆီပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျိူးယွီဟာ ကျူးကော့လျန့်ကို မလှည့်စားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် Cao Cao ကိုတော့ Pang Tong ရဲ့ အကူအညီနဲ့ လှည့်စားနိုင်ပါတယ်။
အရင်က ကျွန်တော်တို့ မှတ်စုကြမ်းမှာ ရေးဖူးတဲ့ ကမ်းပါးနီတိုက်ပွဲမှာ မပါခဲ့သေးတဲ့ ဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ မီးသုံးပြီး တိုက်နိုင်အောင် လေတိုက်ခတ်ဖို့ ကျူးကော့လျန့်ဟာ အစီအရင်ကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျူးကော့လျန့်ဟာ စစ်တိုက်ဖို့အတွက် လေတိုက်အောင် ဆုတောင်းပေးပြီးတာနဲ့ သူတို့လိုတဲ့ လေတိုက်မယ့် အချိန်ကို ခန့်မှန်းပြီး လျူ ပေ့ဆီ ပြန်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ ကျိူးယွီဟာ လေ စတိုက်တာနဲ့ ကျူးကော့လျန့်ကို သတ်ဖို့ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် မမီတော့တာကြောင့် Cao Cao ကို ဦးစားပေးပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ တိုက်ပွဲကို စခဲ့ပါတယ်။ ကမ်းပါးနီတိုက်ပွဲဟာ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကျိူးယွီရဲ့ စဦး တိုက်စစ်ကြောင့် လည်းကောင်း၊ ထွက်ပြေးလာတဲ့ Cao Cao စစ်သည်တွေကို Kongming ရဲ့ ပိတ်ဆို့တိုက်မှုကြောင့် လည်းကောင်း Cao Cao ဟာ နောက်ဆုံး စစ်သည်အနည်းငယ်နဲ့ နေပြည်တော် ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
ကမ်းပါးနီတိုက်ပွဲ နောက်ပိုင်းမှာ ဝူတိုင်းပြည်နဲ့ နယ်မြေကိစ္စ အချင်းများရာမှာလည်း ကျူးကော့လျန့်ဟာ နည်းပရိယာယ် အမျိူးမျိူးသုံးပြီး အ ချိန်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ကျိူးယွီဟာ ကျူးကော့လျန့်ကို ဆက်လက် လုပ်ကြံဖို့ မသေခင်အထိ အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခါတော့ Liu Bei ရဲ့ မြို့တစ် မြို့ကို ဖြတ်သန်းသလိုနဲ့ သိမ်းဖို့ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ကျူးကော့လျန့်ဟာ ကြိုတင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ကျိူးယွီဟာ အသည်းအသန် ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီး စစ်သင်္ဘောပေါ် အရောက် ကျူးကော့လျန့် လူကြုံ ကမ်းလိုက်တဲ့ စာကို ဖတ်ပြီးနောက် သွေးအန်ပြီး သေခဲ့ပါတယ်။ ဒါက အရင် ကမ်းပါးနီတိုက်ပွဲ Post မှာ မပါခဲ့တဲ့ ကျိူးယွီ သေဆုံးခဲ့တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မူကွဲတစ်ခုပါ။ Wiki မှာကတော့ ကျိူးယွီဟာ နာဖျားမှုကြောင့် သေဆုံးတယ်ပဲ ပြောထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အကုန်လုံးကို မြင်သမျှကို ထည့်ရေးပေးထားပါတယ်။ ဟုတ်သည် မဟုတ်သည်ကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ Google မှာ ထပ်မံရှာဖွေလေ့လာကြည့်ပါ။ တချိူ့ မှတ်တမ်းတွေကိုတော့ Weibo နဲ့ တရုတ်ဘာသာနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ Website တချိူ့မှာ ရှာကြည့်ပါ။
ကျိူးယွီဟာ မသေခင် နောက်ဆုံးအချိန်မှာ စွန်းချွမ်ကို ညီမဖြစ်သူနဲ့ လျူ ပေ့ကို လက်ထပ်စေပြီး လုပ်ကြံဖို့ အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ စွန်းချွမ်လည်း ညီမကို Liu Bei နဲ့ ထိမ်းမြားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လျူ ပေ့ကို မလုပ်ကြံဖြစ်လိုက်ပါဘူး။
၂၁၁ ခုနစ်မှာ လျူ ပေ့ကို ရီစီရင်စုနယ်ကို (ယနေ့ခေတ် စီချွမ်ပြည်နယ်နှင့် ချူံချင်းပြည်နယ်) အုပ်ချူ ပ်တဲ့ လျူ ကျန်းဟာ သူ့နယ်ကို ဟန်ကျူံးက ကျန်းလုက လာရောက်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက် စစ်ကူပေးဖို့ အကူညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ ကျူးကော့လျန့် ကွမ်းယီ ကျန်းဖေးတို့က ကျင်းစီရင်စုကို ထိုးစစ်ဆင်စေပြီး တဖက်မှာ လျူ ပေ့က စီချွမ်ပြည်နယ်ထဲကို သူ့စစ်တပ်နဲ့ ဦးဆောင်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ လျူ ပေ့အနေနဲ့ လျူ ကျန်းရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို မဆိုင်းမတွပဲ လက်ခံခဲ့တာဟာ တဖက်လှည့်နဲ့ လျူ ကျန်းရဲ့ နယ်ကို သိမ်းယူဖို့ လျှိူ့ဝှက်အစီအစဉ်တစ်ခု ထားရှိခဲ့တာကြောင့်ပါ။ အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ လျူ ကျန်းဟာ လျူ ပေ့ရဲ့ အကြံစည်ကို ရိပ်မိလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂ ဖက်တပ်တွေဟာ ရန်လိုမှုတွေ စတင်လာပြီး စစ်ပွဲကို စတင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။ ကျူးကော့လျန့် ကျန်းဖေးနဲ့ ကျောက်ယွမ်တို့ရဲ့ တပ်ခွဲတွေဟာ လျူ ပေ့ကို အကူညီပေးရန် ရောက်ရှိလာပြီး လျူ ကျန်းရဲ့ မြို့တော် ချန်သုကို စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ကွမ်းယီကတော့ ကျင်းစီရင်စုကို စောင့်ရှောက်ရန် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၁၄ ခုနစ်မှာတော့ လျူ ကျန်း လက်နက်ချခဲ့အတွက် လျူ ပေ့ဟာ ရီစီရင်စုကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျူးကော့လျန်ဟာ ချန်သုကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ လက်နက်လူသူအင်အားကို ပြန်လည်ဖြည့်နေခဲ့ပါတယ်။
၂၂၁ ခုနစ်မှာတော့ ချောင်ချောင်ရဲ့ ဒုတိယသားဖြစ်သူ ချောင်ပီဟာ ဟန်ဧကရာဇ် ဘုရင်ရှန်းကို ပုန်ကန်ခဲ့ပြီး ဘုရင်ကိုလည်း နန်းချခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ဝေပြည်ထောင်ကို တည်ထောင်ပြီး ထီးနန်းအသစ်ကို ထူထောင်ပါတယ်။ ထိုအခါ လျူ ပေ့ကလည်း သူကိုယ်တိုင် ဧကရာဇ်အဖြစ် ကြေညာခဲ့ပြီး ရှုဟန်နိုင်ငံကို တည်ထောင်ကာ အုပ်စိုးမင်းမူပါတော့တယ်။ ကျူးကော့လျန့်ကိုလည်း အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး နန်းတွင်းအတွင်းဝန် အုပ်ချူ ပ်ရေးမှူးအဖြစ်ပါ ပူးတွဲတာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၂၂ ခုနစ် နွေရာသီမှာတော့ လျူ ပေ့ဟာ ရှောက်ထင်းတိုက်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အပြင်းအထန် ဖျားနာခဲ့ပါတယ်။ လျူ ပေ့နောက်ကနေ ထပ်ချပ်မကွာ လိုက်လာတဲ့ လုရွှမ်ကြောင် ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီမှာ ပိုင်သုချန် အရပ်အထိ ရောက်အောင် ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ ပိုင်သုချန်အနီး လုဖူကမ်းစပ် ယန်ဇီမြစ်အနီးသို့ လုရွှယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ သူဟာ ရန်သူတွေ ချူံ ခိုတိုက်ခိုက်မယ့် အန္တရာယ်အငွေ့အသက်ကို ခံစားမိလာပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လုရွှယ်ဟာ ရှေ့ပြေးကင်းထောက်က်ို ဦးစွာ ထောက်လှမ်းစေတဲ့အခါ ဤနေရာဟာ ခြောက်သွေ့ပြီး ကျောက်တုံးတွေနဲ့ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုတာကြောင့် လုရွှယ်ဟာ တွေဝေသွားခဲ့ရပါတယ်။ အမှန်တော့ သူဟာ ကျူးကော့လျန့် ဆင်ထားတဲ့ BaGua ပကွားဗျူ ဟာထဲ ဝင်မိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ချီအကွက်ကို စတင်ဝင်ရောက်မ်ိခဲ့ပါပြီ။ တကယ်တော့ ကျူးကော့လျန့်ဟာ သူတို့ စီချွမ်နယ်ထဲ စဝင်လာကတည်းက စီရင်ခဲ့တဲ့ ဗျူ ဟာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လုရွှယ်ဟာလည်း သူဟာ ဝင်္ကဘာတစ်ခုထဲ ရောက်နေပြီဆိုတာ ရိပ်မိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သူဟာ လူအနည်းငယ်ကို ဦးဆောင်ပြီး အထဲကို ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူထွက်သွားပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ လေကြမ်းတွေ စတင်တိုက်ခတ်လာပါတယ်။ ဖုန်တွေ မုန်တိုင်းလို တိုက်ခတ်လာပြီး ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီး ကျောက်တုံးတွေဟာ ဓားတွေလို ချွန်ထက်နေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာ ကျောက်ဆောင်တွေပေါ်ကနေ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့အတူ မြစ်ရေပြင် လှိုင်းရိုက်သံလိုတွေ ကြားရပြီး လုရွှယ်ရဲ့ စစ်တပ်ဟာ တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရပါတော့တယ်။
လုရွှယ်ဟာ အာမေဋိတ် အသံနဲ့ "ကျူးကော့လျန့်ရဲ့ ထောင်ခြောက်ထဲ ငါတို့ ကျရောက်နေပြီ" ဟု အော်ဟစ်လိုက်ကာ ဝင်္ကဘာထဲမှ ထွက်ပေါက်နေရာကို ရှာဖွေပေမယ့် မတွေ့ရှိခဲ့ပါဘူး။ ထိုစဉ် လုရွှယ်ဟာ အဘိုးအိုတစ်ယောက်ကို မြင်တွေ့လိုက်ရပြီး သူအား ဝင်္ကဘာထဲ ထွက်ရန်လမ်းပြပေးမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် လုရွှယ်ဟာ အဘိုးအိုရဲ့ လမ်းပြပေးမှုကြောင့် ဝင်္ကဘာထဲမှ ဘေးကင်းစွာ လွတ်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်။ ထို့နောက် အဘိုးအိုက သူ့ကိုယ်သူ စတင်မိတ်ဆက်ပါတယ်။ သူ့နာမည်က ဟွမ်ချန်ယန်ဖြစ်ပြီး ကျူးကော့လျန့်ရဲ့ ယောက္ခထီး ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ အဆ်ိုပါ ဝင်္ကဘာဟာ ပကွားဗေဒင်ကို အခြေခံထားတဲ့ ဝင်္ကဘာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပေးပါတယ်။ ဟွမ်ချန်ယန်က လုရွှယ်ကို ဆက်ပြောပါတယ်။ ကျူးကော့လျန့်ဟာ ဟွမ်ချန်ယန်ကို သူပထမဆုံး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဝင်္ကဘာထဲကို တကယ်လို့ ဝူစစ်သူကြီးရောက်လာခဲ့ရင် ဝူစစ်သူကြီး ထောင်ခြောက်ထဲမှာ ရှုံးနိမ့်မှသာ ကယ်ထုတ်ပေးဖို့လဲ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လုရွှယ်ဟာ မြင်းပေါ်ကဆင်းပြီး ဟွမ်ချန်ယန်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောဆ်ိုပါတယ်။ ဟွမ်ချန်ယန်က ထပ်ပြီး ဝူပြည်နယ်ကို ပြန်သွားရအောင် ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဝေပြည်ထောင်က ချောင်ဝေဟာ ဝူပြည်ထောင်ကို ကျူးကျော်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတာကြောင့် ဝူပြည်ထောင်နဲ့ ပြန်လည်လက်တွဲဖို့ ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ ဝူပြည်ထောင်ကိုလည်း ချောင်ဝေဟာ ၂၂၂ ခုနစ်ကနေ ၂၂၅ ခုနစ်အထိ ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
တဖက်မှာလည်း စစ်ရှုံးနိမ့်ပြီး နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ လျူ ပေ့ဟာလည်း ကျူးကော့လျန့်ကို ချန်သုကနေ ဆင့်ခေါ်ခဲ့ပြီး ကျူးကော့လျန့်အား မှာကြားခဲ့ပါတယ်။
"မင်းဟာ ချောင်ပီထက် ပိုပြီး အမျှော်အမြင် ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ပြီး ငါတို့ရဲ့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ စစ်ဆင်ရေးကြီးကို အဆုံးသတ်ပေးပါ။ ငါ့သားတော် လျူ စန့်ကိုလည်း ကူညီပေးပါ။ တကယ်လို့ သူဟာ ပြီးဆုံးအောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ရင်လည်း မင်းကပဲ နန်းပုလ္လုင်ကို ရယူပေးပါ။"
ကျူးကော့လျန့်ဟာ မျက်ရည်ကြီးစွာကျပြီး "ကျွန်တော် အမှုတော်ကို ကြိုးစားထမ်းရွက်ပြီး သေသည်အထိ သစ္စာကို မယိမ်းယိုင်ပဲ တည်မြဲစေရပါမယ်။" ဟု ကတိပေးသည်။ ထို့နောက် လျူ ပေ့ နတ်ရွာစံပြီး လျူ စန့် နန်းတက်လာသည်။ လျူ စန့်ဟာလည်း ကျူးကော့လျန့်ကို သူ့အဖေလို့ မှတ်ယူပြီး သူ့ဖခင် ရှိစဉ်ကလိုပဲ မြောက်စားပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာပဲ နန်ကျူံးမှာ သူပုန်ထကြွတာကြောင့် ဝူပြည်ထောင်နဲ့ စစ်ပြေငြိမ်းပြီး ပုန်ကန်မှုကို နှိမ်နင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဝူ လျူ မဟာမိတ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဝေပြည်ထောင်နဲ့ ဆက်လျက် တိုက်ခိုက်ကြပြန်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ကျူးကော့လျန့်ရဲ့ ပကွားဗျူ ဟာကို Red Cliff ဇာတ်ကားထဲမှာလည်း တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ COC Game မှာလည်း တရုတ် Player တွေဟာ အဆိုပါ ဗျူ ဟာကို အသုံးပြုပြီး Def Base တွေ တည်ဆောက်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခု အငြင်းပွားနေရတာကတော့ ထိုအချိန်မှာ ခုံမင်ဟာ ချန်သုမှာပဲ ရှိနေခဲ့တာလို့ ဆိုတာကြောင့် အဆ်ိုပါ ဝင်္ကဘာကို တည်ဆောက်ခဲ့သူဟာ ဟွမ်ချန်ယန်ပဲလား။ ကျူးကော့လျန့်ရဲ့ အစီအမံတွေကို ဦးဆောင်ပေးခဲ့သူဟာ ဟွမ်ချန်ယန်လား သူကိုယ်တိုင်ပဲလား။ ဒီဗျူ ဟာက အမှန်တကယ်တော့ အပြင်လက်တွေ့မှာ အလုပ်ဖြစ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတာကို ငြင်းခုန်ကြတဲ့ Website လည်း ရှိပါသေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် အဲ့မှာ သွားပြီး ငြင်းခုန်လို့ ရပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲ့ထဲက ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ comment တစ်ခုကိုပဲ ယူရေးလိုက်ပါတယ်။
လျူ စန့် လက်ထက်မှာ ကျူးကော့လျန့်ဟာ ရှုနယ်မြေကို တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး တိုင်းပြည်အင်အားကို ခိုင်မာအောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆက်ဆံရေး အဖုအထစ်တွေ ရှိခဲ့တဲ့ ဝူတိုင်းပြည်နဲ့လည်း ပြန်လည် မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ထကြွနေတဲ့ တောင်ဘက် ရှုနယ်မြေတွေကို နှိမ်နင်းပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မြောက်ဘက် ချောင်ချောင်ရဲ့ ဆက်ခံသူတွေ ဖြစ်တဲ့ ဝေတိုင်းပြည်ကို ကျူးကျော်ဖို့ စီမံခဲ့ပါတယ်။ တောင်ဘက်နယ်မြေတွေကို နှိမ်နင်းတုန်းက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ ပေါက်စီ သမိုင်းကြောင်းလေးကို ပြန်ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ မှတ်စုကြမ်းမှာလဲ တခါက တင်ပေးပြီးသားလေးပါ။
ကျူးကော့လျန့် တီထွင်ခဲ့တဲ့ ပေါက်စီ
ပေါက်စီ 包子 ပေါင်းကျစ့် Bao Zi
ကျူးကော့လျန့် (Zhuge Liang) ဟာ နန်မန် (Nanman) တောင်းပိုင်းနယ်က တောင်ပိုင်းသား ဂူနေလူရိုင်းများကို တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းဖို့အတွက် သူ့ရဲ့ စစ်တပ်ကြီးနဲ့ အတူ ချီတက်လာပါတယ်။ လုရွှေ (Lu Shui) မြစ်ကမ်းပါးကိုရောက်တဲ့အခါ ဒေသခံတွေက ဒီမြစ်ဟာ နတ်ကြီးတယ်၊ ဖမ်းစားတတ်တယ်၊ လူတွေသေအောင် ပြုစားနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီမြစ်စောင့်နတ်ကို ကျေနပ်အောင် ပူဇော်ပသမှ ရမယ်လို့ ကျူးကော့လျန့်ကို ပြောကြပါတယ်။ ဘယ်လို ပူဇော်ရမလဲလို့ ကျူးကော့လျန့်က မေးတော့ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ နန်မန်လူမျိူး ၄၉ ဦးကို သတ်ပြီး၊ သူတို့ဦးခေါင်းနဲ့ ယဇ်ပူဇော်ရမယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျူးကော့လျန့်ဟာ ကြင်နာတတ်တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင် ဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ့် လူအစစ်ရဲ့ ဦးခေါင်းတွေအစား လူ့ဦးခေါင်းပုံ သဏ္ဍန်တူ မုန့်တွေလုပ်ပြီး နတ်ကို ပူဇော်ပသပါသတဲ့။ အဲဒီအချိန်ကစပြီး နန်မန် လူမျိူးတွေရဲ့ ဦးခေါင်းများနဲ့ သဏ္ဍန်တူ ပေါက်စီလုပ်စားကြတဲ့ ဓလေ့ဟာ စတင်လာခဲ့ကြတယ်လို့ အဆိုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အများစုအထင် အမျိူးသမီး ရင်သားနဲ့ တူတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ပေါက်စီကို တရုတ်ဘာသာနဲ့ နောက်တမျိူး မန်ထို (Man Tou) 馒头 馒 မန်ဆိုတာက ဂျူံပေါင်း
头 ထို ဆိုတာက ဦးခေါင်းကို ပြောတာပါ။ မန်ထိုကို နောက်တမျိူး လူရိုင်းရဲ့ဦးခေါင်းလို့လဲ အဓိပ္ပါယ် ရပါသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Steamed လို့ခေါ်ဆို သုံးနှုန်းကြပါတယ်။ ပေါက်စီအမျိူးအစား များစွာရှိသေးပေမယ့် ယေဘုယအားဖြင့်တော့ Dàbāo 大包 သာ့ပေါင်းလို့ခေါ်တော့ ၆ လက်မ အဝိုင်းရှိ ပေါက်စီနဲ့ (အများစုက ဆိုင်မှာ အလွယ်တကူ ဝယ်စားနိုင်ပြီး) Xiǎobāo 小包 ရှောင်ပေါင်းလို့ ခေါ်တဲ့ ၃ လက်မအဝိုင်း သို့မဟုတ် ထိုထက် သေးငယ်တဲ့ ပေါက်စီသေး (စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ဘူဖေးမှာ အများဆုံး ရောင်းချ) ဆိုပြီး ၂ မျိူးအပေါ်မှာပဲ အခြေခံကာ ခွဲထွက်လာတဲ့ ပေါက်စီမျိူးကွဲများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
မန်ထိုနဲ့ ပေါင်းကျစ့် ကွာခြားချက်
ယွမ်ခေတ် မွန်ဂိုအုပ်စိုးချိန်မှာ အစ္စလာမ်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိနေချိန်ဆိုတော့ သူတို့ဟာ အစာသွပ်ထားရင် မစားတာကြောင့် အစာလွတ်ပေါက်စီ Manti ကို လုပ်စားလာကြပါတယ်။ ကြာတော့ Mantou လို့ အလွယ်ခေါ်ပေမယ့် အခေါ် ၂ မျိူး ရှိတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။ ပထမက မန်ထိုလို့ခေါ်ပြီး စုန့်ခေတ်မှာတော့ အဓိက အစာသွပ်ထားတဲ့ ဂျူံလုံးကို ပေါင်းကျစ့်လို့ ခေါ်လာကြတယ် ပေါင်း ဆိုတာ ထုပ်ပိုးတာ ဋ္ဌာပနာထည့်တာပေါ့။
သစုန့်ခေတ်မှာ ဋ္ဌာပနာထည့်သွင်းထားတဲ့ ပေါက်စီရှိသလို မထည့်ထားတဲ့ ပေါက်စီလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ဋ္ဌာပနာထည့်ထားတာကို ပေါင်းကျစ့် ပေါက်စီလို့ ခေါ်ပြီး မထည့်ထားတာကိုတော့ မန်ထိုလို့ပဲ သုံးနှုန်းခဲ့ကြပါတယ်။
ကျူးကော့လျန့်ရဲ့ နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ
၂၂၈ ခုနစ်ကစလို့ ဝေတိုင်းပြည်ကို ကျူးကျော်မှု ငါးကြိမ် လုပ်ခဲ့ပြီး လေးကြိမ် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျူးကော့လျန့်ဟာ ၂၃၁ ခုနစ် မတိုင်ခင်အထိ ပြိုင်ဘက် မရှိခဲ့ပါဘူး။ စစ်သည် အကျအဆုံး နည်းနည်းနဲ့ အောင်မြင်မှုများကို ရအောင် ယူခဲ့တာနိုင်တာပါပဲ။ လျူ ပေ့လက်ထက်က ထောင်ချီ အရေအတွက် မျှသာ ရှိတဲ့တပ် တွေဟာ သူ့လက်ထက်မှာတော့ ၂ သိန်းအထိ အင်အား တောင့်တင်းခဲ့ပါတယ်။ ၂၃၁ ခုနစ်မှာ ကျူးကော့လျန့်ဟာ သူနဲ့ ညဏ်ရည်တူ ပြိုင်ဘက် စီးမာယိ နဲ့ စတင် ယှဉ်ပြိုင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ချီတောင်ကုန်းတိုက်ပွဲဟာ သူ့ရဲ့ ငါးကြိမ် ကျူးကျော်စစ် ထဲကနေ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အရှုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၃၄ ခုနစ် နှောင်းပိုင်း ဝူကျန်းလွင်ပြင် တိုက်ပွဲမှာ ကျူးကော့လျန့်ဟာ စီးမာယိနဲ့ ထပ်မံ တိုက်ခဲ့ရပြီး တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် အသာမရခဲ့ပါဘူး။ ကျူးကော့လျန့်ဟာ သူ့ရဲ့ ဘယ်ကိစ္စမဆို အသေးစိတ် စီမံတတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် ကျန်းမာရေး ချိူ့ယွင်းပြီး အသက် ၅၃ နှစ် အရွယ် (၁၈၁ -၂၃၄) သူ့ရဲ့ တပ်တဲစခန်း အတွင်းမှာပဲ ကွယ်လွန် ခဲ့ပါတယ်။ သူမသေခင် မှာတော့ တိုင်းပြည် နောင်ရေး စိတ်ချရအောင် ကျန့်ဝမ် နဲ့ ဖေးယီကို သူ့နေရာ ဆက်ခံဖို့ မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ ကျူးကော့လျန့် ကွယ်လွန်ချိန်မှာ လျူ စန့်ဟာ ကျူံးဝူဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံး ဆန္ဒအရ သင်းကျွင်းတောင်မှာ ရုပ်အလောင်းကို မြုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။
ကျူးကော့လျန့်မှာ အကိုတစ်ယောက် ညီတစ်ယောက် ညီမတစ်ယောက် ရှိပြီး ဟွမ်ယွဲ့ယင်းနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ကာ သား ၂ ယောက် မွေးဖွားခဲ့ပြီး တစ်ယောက်ကတော့ စစ်ပွဲမှာပဲ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ကျူးကော့လျန့်၏ တီထွင်မှုများ
ကျူးကော့လျန့်ဟာ မန်ထိုပေါက်စီ မြေမြှုပ်မိုင်းနဲ့ လန်ချားကဲ့သို့သော သယ်ဆောင်ရ လွယ်ကူစေရန် ပြုလုပ်ထားသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အနှေးယာဉ်များကို တီထွင်ခဲ့သည်။ သူ၏ တီထွင်မှုများထဲမှ နာမည်ကျော် တီထွင်မှုမှာ 諸葛弩 Zhuge Nu ခေါ် မောင်းပြန်ဒူးလေးကို တီထွင်ခဲ့သည်။ မောင်းပြန်ဒူးလေးမှာ ယနေ့ခေတ် မောင်းပြန်သေနတ်တို့၏ မူလအစ ဖြစ်ပြီး ထိရောက်မှု အကွာအဝေးမှာ ပေ ၂၆၀ အတွင်းသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ထိရောက်မှု အကွာအဝေး နည်းပါးသော်လည်း အနီးကပ်တိုက်ပွဲများတွင် ပစ်အားမှာ အရေးပါသည် ဖြစ်သည့်အတွက် ထိရောပ်မှု ရှိသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ထို့ပြင် တပ်တွေ အချင်းချင်း ညခင်းဆက်သွယ်ရာတွင် လွယ်ကူစေရန် ခုံးမင်မီးပုံးဟု ခေါ်သော မီးပုံးများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကို သိသည့် စီးမာယိသည် ဖင်းယန်တိုက်ပွဲကို ကျူးကော့လျန့်ကို လှည့်စားကာ အနိုင်ယူခဲ့ပေသည်။ ကျူးကော့လျန့် ရေးသားခဲ့သော စာပေများတွင် Thirty-Six Stratagems နှင့် Mastering the Art of War (စွန်းဇူ ရဲ့ The Art of War မဟုတ်ပါ။) တို့မှာ ထင်ရှားသည်။
ကျူးကော့လျန့်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘုရားကျောင်းများစွာ တည်ဆောက်ခဲ့ကြတဲ့အနက် ချန်သုနဲ့ ပိုင်သုချန်တို့မှာ တည်ရှိတဲ့ ဘုရားကျောင်းတို့မှာ ထင်ရှားပြီး ယနေ့ထက်တိုင် လာရောက်ဂါရဝပြုသူ အများအပြား လာရောက်ကြပြီး စည်းကားလှသည်။
ကြူးကော့လနျြ့ (ခုံးမငျ) 诸葛亮 (孔明) Zhuge Liang (Kong Ming)
ကြူးကော့လနျြ့ ချေါ ခုံးမိနျဟာ Shu Han ရှုဟနျ ပွညျထောငျရဲ့ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဝနျကွီးခြူ ပျ တဈဦးဖွဈပွီး ၃ ပွညျထောငျခတျေမှာ ထငျရှားခဲ့တဲ့ စဈသူကွီး တဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ နာမညျကြျော Sun Tzu စှနျဇူး နဲ့တောငျ နှိုငျးယှဉျခံရတဲ့ တရုတျပွညျရဲ့ စဈပညာရှငျ တဈဦး ဖွဈသူ ကြူးကော့လနျြ့ အကွောငျးကို ကြှနျတျောတို့ မှတျစုကွမျးမှ တငျဆကျ ပေးလိုကျပါတယျ။
မှတျခကျြ။ ။ Sun Tzu or 孙子 Sun Zi ဟာ နာမညျကြျော Arts of War ဗြူ ဟာကမျြးကို ရေးသားသူဖွဈပွီး Sun Quan ဟာ သူ့ရဲ့ မြိူးဆကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ Sun Quan ဆိုတာ Wu ပွညျထောငျကို တညျထောငျသူဖွဈပွီး ၃ ပွညျထောငျခတျေမှာ ထငျရှားတဲ့ နယျစားကွီးဖွဈပွီး Zhou Yu ကြိူးယှီတို့လို သူရဲကောငျးတှေ ထှနျးကားခဲ့တဲ့ နယျတဈခုပါ။
ကြူးကော့လနျြ့ဟာ ဉာဏျပညာ ထကျမွတျသူဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ စဈဗြူ ဟာ တီထှငျမှုတှကွေောငျ့ ရှုပွညျထောငျဟာ အတောကျပဆုံး ပွညျထောငျတဈခု ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ကြူးကော့လနျြ့ရဲ့ ထငျရှားတဲ့ အမှတျအသားတဈခုကတော့ သူအမွဲဝတျဆငျလေ့ ရှိတဲ့ တာအိုဘုနျးကွီးတှေ ဝတျလရှေိ့တဲ့ ဝတျစုံနဲ့ အဖွူ ရောငျ ကွိုးကွာငှကျမှေး ယကျတောငျတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကြူးကော့လနျြ့ကို နာမညျပွောငျ အနနေဲ့ ပုနျးနသေော နဂါးလို့ ပွောဆိုလေ့ ရှိပါတယျ။ တခြိူ့ စာအုပျတှမှောတော့ ဝပျနသေော နဂါး/ အိပျနသေော နဂါး စသညျ့ဖွငျ့ ရေးသားထားတာ တှရေ့ပါတယျ။
ကြူးကော့လနျြ့ကို ၁၈၁ ၌ ရနျသုနယျ စနျးတုနျးစီရငျစုမှာ မှေးဖှားပွီး သူဟာ Tai Shan ထိုကျစနျး ဒုတိယ
အုပျခြူ ပျရေးမှူးရဲ့ ဒုတိယမွောကျသား ဖွဈကာ မှေးခငျြး အဈကို တဈယောကျ၊ ညီတဈယောကျနဲ့ ညီမ တဈယောကျ ရှိပါတယျ။ ၁၀ နှဈအရှယျမှာ မိဘ နှဈပါးလုံး မရှိတော့ဘဲ အဝါရောငျသူပုနျတှကွေောငျ့ တောငျဘကျ လြူ ပွောငျအုပျခြူ ပျတဲ့ ကငျြးစီရငျစုနယျ Yuzhang ယှဲ့ကနျြးမွို့က ဦးလေးဖွဈသူထံသို့ ပွောငျးရှခေဲ့ရပါတယျ။
ဦးလေးဖွဈသူဟာ မကွာခငျ မွို့စား ဖွဈလာတာကွောငျ့ အေးအေးဆေးဆေး ရှိခဲ့ပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ Han ဘုရငျ အစိုးရရဲ့ ညံ့ဖငျြးမှုကွောငျ့ မွို့စားတှအေခငျြးခငျြး နယျမွလေုစဈပှဲတှေ ဖွဈလာတဲ့အခါမှာ ဦးလေးဖွဈသူလညျး ကှယျလှနျ သှားခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ညီငယျဖွဈသူနဲ့ အတူ Jingzhou မွို့ကို ပွောငျးရှခေဲ့ပါတယျ။ အသကျ ၁၇ နှဈမှာ မွို့ စာသငျကြောငျးမှာ ပညာစတငျ သငျကွားပွီး အတနျးဖျော အားလုံးထကျ ပညာအရာမှာ အသာရကာ အသကျ ၂၀ မှာပငျ ဆကျလကျ သငျစရာ မကနျြတော့အောငျ တျောခဲ့ပါတယျ။ ငွငျးခုနျခွငျးမှာ ဝါသနာပါကွတဲ့ အတနျးဖျောတှနေဲ့ ခပျကငျးကငျး နခေဲ့တာကွောငျ့ သူ့မှာ ရငျးနှီးတဲ့ သူငယျခငျြး နညျးခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အတနျးဖျော သူငယျခငျြးမြားဟာ မငျးနပွေညျတျော အသီးသီး မှာ ရာထူးတှေ ထမျးဆောငျကွပမေယျ့ Kongming ကတော့ ကြေးလကျမှာပဲ နထေိုငျပွီး အာဏာ စညျးစိမျတှကေိုလညျး မမကျမောခဲ့ပါဘူး။
ကြူးကော့လနျြ့နဲ့ အရငျးနှီးဆုံး သူငယျခငျြး ၄ ယောကျရှိပွီး နောကျထပျ ရငျးနှီးတဲ့ ပညာရှိ ၃ ယောကျလဲ ရှိပါသေးတယျ။ တဈနေ့ သူနဲ့ ရငျးနှီးတဲ့ ပညာရှိ Huang Chenyan ဟှမျခနျြယနျ့ဟာ "ငါကွားမိတယျ။ မငျးအတှကျ အိမျထောငျဖကျကို ရှာနတေယျဆို။ ငါ့မှာ ရုပျဆိုးတဲ့ သမီးတဈယောကျရှိတယျ။ သူမဟာ အဝါရောငျ မကျြနှာနဲ့ မညျးနကျတဲ့ အသားရညျ ရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပငျကိုယျ အရညျအသှေးနဲ့ ဉာဏျပညာမှာတော့ မငျးနဲ့ ယှဉျလို့ရတယျ။" လို့ ပွောတဲ့အခါ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ သူမကို တှခေ့ငျြလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဟှမျခနျြယနျ့ဟာ သူ့သမီးဖွဈသူ 黄月英 Huang Yue Ying ဟှမျယှဲ့ယငျးနဲ့ ကြူးကော့လနျြ့ကို တှစေ့တေဲ့အခါမှာ သူဟာ ဟှမျယှဲ့ယငျးကို သဘောကပြွီး လကျထပျခဲ့ပါတယျ။
စာကွှငျး ။ ။ သငျတို့ဆိုလြှငျကော ဘယျလို မိနျးကလေး/ ယောကျြားလေးမြိူးကို အိမျထောငျဖကျ အဖွဈ ရှေးခယျြကွမလဲ။
လြူ ပထေံ့၌ အမှုထမျးခွငျး
လြူ ပဟေ့ာ လြူ ပွောငျရဲ့ ကငျြးစီရငျစုနယျမှာ ဒုက်ခသညျအဖွဈ ခိုလှုံနရေခြိနျမှာ သူ့ဆီကို Sima Hui စီးမာဟှေ့ ရောကျလာပွီး လတျတလော စာသငျကြောငျးတှမှော ထှကျပျေါနတေဲ့ အတိတျတဘောငျ အကွောငျးကို ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ ဝပျနတေဲ့ နဂါးနဲ့ မီးငှကျငယျ တဈကောငျဟာ တခြိနျတညျး တနရောထဲမှာ ထှကျပျေါလာတယျ ဆိုတာပဲ။ ဒါဟာ သူနဲ့ သူ့ငယျခငျြး ဖွဈသူ Pang Tong ဖနျးတုနျ နှဈယောကျထဲက တဈယောကျရဲ့ ခစားမှုကို ရရငျ တရုတျပွညျကို အုပျစိုးနိုငျမယျလို့ ဆိုလိုတာပါ။ (တခြိူ့က စီးမာယိလို့လဲ ပွောကွပါတယျ။ စီးမာယိ တဈယောကျသာ ကြူးကော့လနျြ့ကို ရှုံးနိမျ့စခေဲ့ဖူးပါတယျ။)
မှတျခကျြ။ ။ ၃ ပွညျထောငျသမိုငျးကို ဖတျတဲ့အခါမှာ အမြားဆုံး တှရေ့တာကတော့ ရှဟုတျ 夏侯 နဲ့ စီးမ 司马 ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ 夏侯 မှာ 夏 ဟာ မြိူးနှယျ နာမညျဖွဈပွီး 侯 ကတော့ မွို့စားရာထူးပါ။ စာလုံး ၂ လုံး ပေါငျးရငျတော့ ရှဟုတျမြိူးနှယျကို ဆိုလိုခွငျး ဖွဈပါတယျ။ 司马 စီးမာကတော့ ၃ ပွညျထောငျခတျေ အစပိုငျးတှမှော ရှတေ့နျး စဈအကွံပေး သို့မဟုတျ စဈစခနျးမှာ လိုကျပါရတဲ့ စဈဝနျကွီး ရာထူး ဖွဈပွီး ဟနျခတျေနှောငျးပိုငျးနဲ့ ၃ ပွညျထောငျခတျေ အစပိုငျးတှမှောတော့ မြိူးရိုးနာမညျအဖွဈပါ သုံးလာကွတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ထိုအခါ လြူ ပရေဲ့ မိတျဆှေ ရှယျရှုဟာ ကြူးကော့လနျြ့ ဖွဈနိုငျကွောငျး အကွံပွု ထောငျခံခဲ့ပါတယျ။ ထိုအခါ လြူ ပကေ့ တှခေ့ငျြကွောငျးပွောပွီး ကြူးကော့လနျြ့ကို လာရောကျဖို့ ဖိတျချေါတဲ့အခါ ရှယျရှုက "ခငျဗြား တှခေ့ငျြရငျ သူ့ကို သှားတှမှေ့ပဲ ရမယျ။ သူကတော့ ခငျဗြားကို ဘယျတော့မှ တှဆေုံ့ဖို့ ဖိတျချေါမှာ မဟုတျဖူး။" ဟု ပွနျဖွပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ လြူ ပဟေ့ာ ၃ ကွိမျခနျ့ ကြူးကော့လနျြ့ကို သှားရောကျတှဆေုံ့ပမေယျ့ လြူ ပကေို့ စမျးသပျတဲ့အနနေဲ့ အတှမေ့ခံပဲ နောကျဆုံးကမြှ လြူ ပကေို့ တှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။ အဒေီ ၂၀၇ ခုနဈမှာ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ လြူ ပဆေီ့မှာ အမှုထမျးခဲ့ပါတယျ။ လြူ ပဟေ့ာလညျး ကြူးကော့လနျြ့ရဲ့ ထကျမွတျတဲ့ အရညျအသှေးကွောငျ့ လေးစားခဲ့ပွီး ပိုမိုနှီးနှော တိုငျပငျခဲ့တာကွောငျ့ ညီအကို ၂ ဦးဖွဈတဲ့ ကှမျးယီနဲ့ ကနျြးဖေးတို့ရဲ့ ဝနျတိုမှုကိုလညျး ခံခဲ့ရပါတယျ။ ထိုအခါ လြူ ပကေ့ "အခုအခါမှ ခုံးမိနျနဲ့ တှခှေ့ငျ့ရတဲ့ ငါဟာ အခုမှ ရတှေတေဲ့ ငါးလိုပဲ။ ဒါကွောငျ့ မငျးတို့ရဲ့ မကနြေပျတဲ့ အမှုအရာတှကေို မလုပျကွဖို့ ငါမြှျောလငျ့ပါတယျ။" ဟု ပွောဆိုမှသာ ကှမျးယီနဲ့ ကနျြးဖေးဟာ အတှနျ့တကျခွငျး မရှိတော့ပဲ ခုံးမိနျပွောသမြှကို နာခံလာပါတယျ။
ကြူးကော့လနျြ့ဟာ လြူ ပဆေီ့မှာ အမှုထမျးပွီး နောကျတဈနှဈ ခရဈနှဈ ၂၀၈ မှာ လြူ ပွောငျဆုံးပါးသှားခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့သား အငယျဆုံး လြူ ခြူံဟာ ခြောငျခြောငျဆီမှာ လကျနကျခတြဲ့အတှကျ ခြောငျခြောငျဟာ တရုတျပွညျ တောငျပိုငျးကို စဈတပျနဲ့ ခြီတကျလာခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီနောကျမှာတော့ လြူ ပေ့ နဲ့ သူ့လူတှဟော တောငျဘကျ ရှခို 夏口 အရပျထိ ထှကျပွေးခဲ့ရပါတယျ။ လြူ ပွောငျရဲ့သား လြူ ခြီနဲ့ ဒုက်ခသညျ ၁ သိနျးကြျောလညျး လြူ ပနေဲ့ အတူတူ လိုကျပါခဲ့ပွီး လြူ ပဆေီ့မှာတော့ စဈသညျ ၁၀၀၀ သာ ရှိပါတယျ။ ထိုအခါ ခနျြးပနျတိုကျပှဲ ဖွဈပှားခဲ့ပွီး လြူ ပနေဲ့ ကြူးကော့လနျြ့တို့ဟာ စှနျးခြှမျရှိတာ တောငျဘကျပိုငျးကို ထှကျပွေးရပါတော့တယျ။ ခနျြပနျးတိုကျပှဲမှာလညျး ကြူးကော့လနျြ့ရဲ့ အစီအမံကောငျးမှုကွောငျ့ အောငျမွငျစှာ ဆုတျခှာနိုငျခဲ့တာလဲ ဖွဈပါတယျ။ ထို့နောကျ ကမျးပါးနီတိုကျပှဲကွီး ဖွဈပှားခဲ့ပွီး လြူ စှနျး မဟာမိတျတပျမြား အောငျပှဲခံနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ကမျးပါးနီတိုကျပှဲအကွောငျး ဖတျရှုရနျ Link
ကမျးပါးနီတိုကျပှဲမှာ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ ဝူတပျရဲ့ စဈသူကွီး ကြိူးယှီကို စဈဘကျ အကွံပေးအနနေဲ့ အကူအညီ ပေးခဲ့ပမေယျ့ ကြိူးယှီဟာ သူကွံသမြှ သိနတေဲ့ ကြူးကော့လနျြ့ကို မနာလိုတာ တဈကွောငျး၊ တကယျလို့ ခြောငျခြောငျကို နိုငျသှားပါက ဝူတိုငျးပွညျအတှကျ ရှရေ့ေးမှာ အတားအဆီး မဖွဈစဖေို့ တဈကွောငျးကွောငျ့ ကြူးကော့လနျြ့ရဲ့ အသကျကို လုပျကွံဖို့ နညျးမြိူး ကွိုးစားခဲ့ပါတယျ။
ကမျးပါးနီတိုကျပှဲအတှငျးမှာ ထငျရှားတဲ့ အဖွဈအပကျြကို ပွောရရငျ ၁၀ ရကျအတှငျး မွား အခြောငျး တဈသိနျး လုပျခိုငျးတာလဲ ပါဝငျပါတယျ။ ကြူးကော့လနျြ့ကတော့ အခြိနျသုံးရကျသာ ယူခဲ့ပွီး ခြောငျခြောငျရဲ့ တပျတှကေို မွူ တှကေဆြငျးနခြေိနျမှာ စဈသငေ်ျဘာတှေ ခြီလာသလို လှညျ့စားကာ မွားတှေ ပဈခိုငျးပွီး သငေ်ျဘာပျေါက ကောကျရိုးထုံးမှာ လာစိုကျတဲ့ မွားတဈသိနျးကြျောကို ကြိူးယှီ ဆီပေးခဲ့ပါတယျ။ ကြိူးယှီဟာ ကြူးကော့လနျြ့ကို မလှညျ့စားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ Cao Cao ကိုတော့ Pang Tong ရဲ့ အကူအညီနဲ့ လှညျ့စားနိုငျပါတယျ။
အရငျက ကြှနျတျောတို့ မှတျစုကွမျးမှာ ရေးဖူးတဲ့ ကမျးပါးနီတိုကျပှဲမှာ မပါခဲ့သေးတဲ့ ဒဏ်ဍာရီဆနျတဲ့ မီးသုံးပွီး တိုကျနိုငျအောငျ လတေိုကျခတျဖို့ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ အစီအရငျကို ပွုလုပျပေးခဲ့ပါတယျ။ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ စဈတိုကျဖို့အတှကျ လတေိုကျအောငျ ဆုတောငျးပေးပွီးတာနဲ့ သူတို့လိုတဲ့ လတေိုကျမယျ့ အခြိနျကို ခနျ့မှနျးပွီး လြူ ပဆေီ့ ပွနျပွေးခဲ့ပါတယျ။ ကြိူးယှီဟာ လေ စတိုကျတာနဲ့ ကြူးကော့လနျြ့ကို သတျဖို့ လုပျခဲ့ပမေယျ့ မမီတော့တာကွောငျ့ Cao Cao ကို ဦးစားပေးပွီး တိုကျခိုကျဖို့ တိုကျပှဲကို စခဲ့ပါတယျ။ ကမျးပါးနီတိုကျပှဲဟာ အကွီးအကယျြ အောငျမွငျခဲ့ပွီး ကြိူးယှီရဲ့ စဦး တိုကျစဈကွောငျ့ လညျးကောငျး၊ ထှကျပွေးလာတဲ့ Cao Cao စဈသညျတှကေို Kongming ရဲ့ ပိတျဆို့တိုကျမှုကွောငျ့ လညျးကောငျး Cao Cao ဟာ နောကျဆုံး စဈသညျအနညျးငယျနဲ့ နပွေညျတျော ပွနျခဲ့ရပါတယျ။
ကမျးပါးနီတိုကျပှဲ နောကျပိုငျးမှာ ဝူတိုငျးပွညျနဲ့ နယျမွကေိစ်စ အခငျြးမြားရာမှာလညျး ကြူးကော့လနျြ့ဟာ နညျးပရိယာယျ အမြိူးမြိူးသုံးပွီး အ ခြိနျဆှဲခဲ့ပါတယျ။ ကြိူးယှီဟာ ကြူးကော့လနျြ့ကို ဆကျလကျ လုပျကွံဖို့ မသခေငျအထိ အားထုတျခဲ့ပါတယျ။ တဈခါတော့ Liu Bei ရဲ့ မွို့တဈ မွို့ကို ဖွတျသနျးသလိုနဲ့ သိမျးဖို့ လုပျခဲ့ပမေယျ့ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ ကွိုတငျမွငျခဲ့တာကွောငျ့ ကြိူးယှီဟာ အသညျးအသနျ ထှကျပွေးခဲ့ရပွီး စဈသငေ်ျဘာပျေါ အရောကျ ကြူးကော့လနျြ့ လူကွုံ ကမျးလိုကျတဲ့ စာကို ဖတျပွီးနောကျ သှေးအနျပွီး သခေဲ့ပါတယျ။ ဒါက အရငျ ကမျးပါးနီတိုကျပှဲ Post မှာ မပါခဲ့တဲ့ ကြိူးယှီ သဆေုံးခဲ့တဲ့ အကွောငျးနဲ့ ပတျသတျပွီး မူကှဲတဈခုပါ။ Wiki မှာကတော့ ကြိူးယှီဟာ နာဖြားမှုကွောငျ့ သဆေုံးတယျပဲ ပွောထားပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ အကုနျလုံးကို မွငျသမြှကို ထညျ့ရေးပေးထားပါတယျ။ ဟုတျသညျ မဟုတျသညျကတော့ ကိုယျတိုငျပဲ Google မှာ ထပျမံရှာဖှလေလေ့ာကွညျ့ပါ။ တခြိူ့ မှတျတမျးတှကေိုတော့ Weibo နဲ့ တရုတျဘာသာနဲ့ ရေးသားထားတဲ့ Website တခြိူ့မှာ ရှာကွညျ့ပါ။
ကြိူးယှီဟာ မသခေငျ နောကျဆုံးအခြိနျမှာ စှနျးခြှမျကို ညီမဖွဈသူနဲ့ လြူ ပကေို့ လကျထပျစပွေီး လုပျကွံဖို့ အကွံပေးခဲ့ပါတယျ။ စှနျးခြှမျလညျး ညီမကို Liu Bei နဲ့ ထိမျးမွားပေးလိုကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လြူ ပကေို့ မလုပျကွံဖွဈလိုကျပါဘူး။
၂၁၁ ခုနဈမှာ လြူ ပကေို့ ရီစီရငျစုနယျကို (ယနခေ့တျေ စီခြှမျပွညျနယျနှငျ့ ခြူံခငျြးပွညျနယျ) အုပျခြူ ပျတဲ့ လြူ ကနျြးဟာ သူ့နယျကို ဟနျကြူံးက ကနျြးလုက လာရောကျတိုကျခိုကျလာတဲ့အတှကျ စဈကူပေးဖို့ အကူညီတောငျးခံခဲ့ပါတယျ။ ကြူးကော့လနျြ့ ကှမျးယီ ကနျြးဖေးတို့က ကငျြးစီရငျစုကို ထိုးစဈဆငျစပွေီး တဖကျမှာ လြူ ပကေ့ စီခြှမျပွညျနယျထဲကို သူ့စဈတပျနဲ့ ဦးဆောငျထှကျခှာသှားပါတယျ။ လြူ ပအေ့နနေဲ့ လြူ ကနျြးရဲ့ တောငျးဆိုခကျြကို မဆိုငျးမတှပဲ လကျခံခဲ့တာဟာ တဖကျလှညျ့နဲ့ လြူ ကနျြးရဲ့ နယျကို သိမျးယူဖို့ လြှိူ့ဝှကျအစီအစဉျတဈခု ထားရှိခဲ့တာကွောငျ့ပါ။ အဲ့ဒီနှဈမှာပဲ လြူ ကနျြးဟာ လြူ ပရေဲ့ အကွံစညျကို ရိပျမိလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ၂ ဖကျတပျတှဟော ရနျလိုမှုတှေ စတငျလာပွီး စဈပှဲကို စတငျဆငျနှဲခဲ့ပါတယျ။ ကြူးကော့လနျြ့ ကနျြးဖေးနဲ့ ကြောကျယှမျတို့ရဲ့ တပျခှဲတှဟော လြူ ပကေို့ အကူညီပေးရနျ ရောကျရှိလာပွီး လြူ ကနျြးရဲ့ မွို့တျော ခနျြသုကို စတငျတိုကျခိုကျခဲ့ပွီး ကှမျးယီကတော့ ကငျြးစီရငျစုကို စောငျ့ရှောကျရနျ ကနျြရဈခဲ့ပါတယျ။ ၂၁၄ ခုနဈမှာတော့ လြူ ကနျြး လကျနကျခခြဲ့အတှကျ လြူ ပဟေ့ာ ရီစီရငျစုကို ပွနျလညျရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကြူးကော့လနျြဟာ ခနျြသုကို ကာကှယျဖို့နဲ့ လကျနကျလူသူအငျအားကို ပွနျလညျဖွညျ့နခေဲ့ပါတယျ။
၂၂၁ ခုနဈမှာတော့ ခြောငျခြောငျရဲ့ ဒုတိယသားဖွဈသူ ခြောငျပီဟာ ဟနျဧကရာဇျ ဘုရငျရှနျးကို ပုနျကနျခဲ့ပွီး ဘုရငျကိုလညျး နနျးခခြဲ့ပါတယျ။ ထို့နောကျ ဝပွေညျထောငျကို တညျထောငျပွီး ထီးနနျးအသဈကို ထူထောငျပါတယျ။ ထိုအခါ လြူ ပကေ့လညျး သူကိုယျတိုငျ ဧကရာဇျအဖွဈ ကွညောခဲ့ပွီး ရှုဟနျနိုငျငံကို တညျထောငျကာ အုပျစိုးမငျးမူပါတော့တယျ။ ကြူးကော့လနျြ့ကိုလညျး အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျခနျ့အပျခဲ့ပွီး နနျးတှငျးအတှငျးဝနျ အုပျခြူ ပျရေးမှူးအဖွဈပါ ပူးတှဲတာဝနျ ပေးအပျခဲ့ပါတယျ။
၂၂၂ ခုနဈ နှရောသီမှာတော့ လြူ ပဟေ့ာ ရှောကျထငျးတိုကျပှဲမှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး အပွငျးအထနျ ဖြားနာခဲ့ပါတယျ။ လြူ ပနေ့ောကျကနေ ထပျခပျြမကှာ လိုကျလာတဲ့ လုရှမျကွောငျ ပူပွငျးတဲ့ နှရောသီမှာ ပိုငျသုခနျြ အရပျအထိ ရောကျအောငျ ပွေးခဲ့ရပါတယျ။ ပိုငျသုခနျြအနီး လုဖူကမျးစပျ ယနျဇီမွဈအနီးသို့ လုရှယျရောကျတဲ့အခါမှာတော့ သူဟာ ရနျသူတှေ ခြူံ ခိုတိုကျခိုကျမယျ့ အန်တရာယျအငှအေ့သကျကို ခံစားမိလာပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ လုရှယျဟာ ရှပွေ့ေးကငျးထောကျကို ဦးစှာ ထောကျလှမျးစတေဲ့အခါ ဤနရောဟာ ခွောကျသှပွေီ့း ကြောကျတုံးတှနေဲ့ ပွနျ့ကြဲနတေဲ့ နရောဖွဈတယျလို့ ဆိုတာကွောငျ့ လုရှယျဟာ တှဝေသှေားခဲ့ရပါတယျ။ အမှနျတော့ သူဟာ ကြူးကော့လနျြ့ ဆငျထားတဲ့ BaGua ပကှားဗြူ ဟာထဲ ဝငျမိနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ အရငျဆုံး ခြီအကှကျကို စတငျဝငျရောကျမိခဲ့ပါပွီ။ တကယျတော့ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ သူတို့ စီခြှမျနယျထဲ စဝငျလာကတညျးက စီရငျခဲ့တဲ့ ဗြူ ဟာလညျး ဖွဈပါတယျ။
လုရှယျဟာလညျး သူဟာ ဝင်ျကဘာတဈခုထဲ ရောကျနပွေီဆိုတာ ရိပျမိနပေါပွီ။ ဒါကွောငျ့ သူဟာ လူအနညျးငယျကို ဦးဆောငျပွီး အထဲကို ဝငျသှားခဲ့ပါတယျ။ သူထှကျသှားပွီး သိပျမကွာခငျမှာ လကွေမျးတှေ စတငျတိုကျခတျလာပါတယျ။ ဖုနျတှေ မုနျတိုငျးလို တိုကျခတျလာပွီး ကောငျးကငျတဈခုလုံး ဖုံးလှမျးသှားခဲ့ပွီး ကြောကျတုံးတှဟော ဓားတှလေို ခြှနျထကျနတော တှလေို့ကျရပါတယျ။ အဲ့နောကျမှာ ကြောကျဆောငျတှပေျေါကနေ ဖုနျမှုနျ့တှနေဲ့အတူ မွဈရပွေငျ လှိုငျးရိုကျသံလိုတှေ ကွားရပွီး လုရှယျရဲ့ စဈတပျဟာ တိုကျခိုကျခွငျး ခံရပါတော့တယျ။
လုရှယျဟာ အာမဋေိတျ အသံနဲ့ "ကြူးကော့လနျြ့ရဲ့ ထောငျခွောကျထဲ ငါတို့ ကရြောကျနပွေီ" ဟု အျောဟဈလိုကျကာ ဝင်ျကဘာထဲမှ ထှကျပေါကျနရောကို ရှာဖှပေမေယျ့ မတှရှေိ့ခဲ့ပါဘူး။ ထိုစဉျ လုရှယျဟာ အဘိုးအိုတဈယောကျကို မွငျတှလေို့ကျရပွီး သူအား ဝင်ျကဘာထဲ ထှကျရနျလမျးပွပေးမညျဟု ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ အဲ့နောကျ လုရှယျဟာ အဘိုးအိုရဲ့ လမျးပွပေးမှုကွောငျ့ ဝင်ျကဘာထဲမှ ဘေးကငျးစှာ လှတျမွောကျခဲ့ရပါတယျ။ ထို့နောကျ အဘိုးအိုက သူ့ကိုယျသူ စတငျမိတျဆကျပါတယျ။ သူ့နာမညျက ဟှမျခနျြယနျဖွဈပွီး ကြူးကော့လနျြ့ရဲ့ ယောက်ခထီး ဖွဈကွောငျး ပွောပါတယျ။ အဆိုပါ ဝင်ျကဘာဟာ ပကှားဗဒေငျကို အခွခေံထားတဲ့ ဝင်ျကဘာဖွဈကွောငျး ရှငျးပွပေးပါတယျ။ ဟှမျခနျြယနျက လုရှယျကို ဆကျပွောပါတယျ။ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ ဟှမျခနျြယနျကို သူပထမဆုံး တညျဆောကျခဲ့တဲ့ ဝင်ျကဘာထဲကို တကယျလို့ ဝူစဈသူကွီးရောကျလာခဲ့ရငျ ဝူစဈသူကွီး ထောငျခွောကျထဲမှာ ရှုံးနိမျ့မှသာ ကယျထုတျပေးဖို့လဲ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ လုရှယျဟာ မွငျးပျေါကဆငျးပွီး ဟှမျခနျြယနျကို ကြေးဇူးတငျကွောငျး ပွောဆိုပါတယျ။ ဟှမျခနျြယနျက ထပျပွီး ဝူပွညျနယျကို ပွနျသှားရအောငျ ကူညီပေးခဲ့ပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဝပွေညျထောငျက ခြောငျဝဟော ဝူပွညျထောငျကို ကြူးကြျောဖို့ ပွငျဆငျနတောကွောငျ့ ဝူပွညျထောငျနဲ့ ပွနျလညျလကျတှဲဖို့ ဆန်ဒရှိနပေါတယျ။ ဝူပွညျထောငျကိုလညျး ခြောငျဝဟော ၂၂၂ ခုနဈကနေ ၂၂၅ ခုနဈအထိ ကြူးကြျော တိုကျခိုကျခဲ့ပါတယျ။
တဖကျမှာလညျး စဈရှုံးနိမျ့ပွီး နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့ လြူ ပဟေ့ာလညျး ကြူးကော့လနျြ့ကို ခနျြသုကနေ ဆငျ့ချေါခဲ့ပွီး ကြူးကော့လနျြ့အား မှာကွားခဲ့ပါတယျ။
"မငျးဟာ ခြောငျပီထကျ ပိုပွီး အမြှျောအမွငျ ရှိပါတယျ။ နိုငျငံတျောကို ကာကှယျပွီး ငါတို့ရဲ့ မပွီးဆုံးသေးတဲ့ စဈဆငျရေးကွီးကို အဆုံးသတျပေးပါ။ ငါ့သားတျော လြူ စနျ့ကိုလညျး ကူညီပေးပါ။ တကယျလို့ သူဟာ ပွီးဆုံးအောငျ မဆောငျရှကျနိုငျရငျလညျး မငျးကပဲ နနျးပုလ်လုငျကို ရယူပေးပါ။"
ကြူးကော့လနျြ့ဟာ မကျြရညျကွီးစှာကပြွီး "ကြှနျတျော အမှုတျောကို ကွိုးစားထမျးရှကျပွီး သသေညျအထိ သစ်စာကို မယိမျးယိုငျပဲ တညျမွဲစရေပါမယျ။" ဟု ကတိပေးသညျ။ ထို့နောကျ လြူ ပေ့ နတျရှာစံပွီး လြူ စနျ့ နနျးတကျလာသညျ။ လြူ စနျ့ဟာလညျး ကြူးကော့လနျြ့ကို သူ့အဖလေို့ မှတျယူပွီး သူ့ဖခငျ ရှိစဉျကလိုပဲ မွောကျစားပါတယျ။ ထိုအခြိနျမှာပဲ နနျကြူံးမှာ သူပုနျထကွှတာကွောငျ့ ဝူပွညျထောငျနဲ့ စဈပွငွေိမျးပွီး ပုနျကနျမှုကို နှိမျနငျးခဲ့ရပါတယျ။ ဝူ လြူ မဟာမိတျ ပွနျလညျဖှဲ့စညျးခဲ့ပွီး ဝပွေညျထောငျနဲ့ ဆကျလကျြ တိုကျခိုကျကွပွနျပါတယျ။
မှတျခကျြ။ ။ ကြူးကော့လနျြ့ရဲ့ ပကှားဗြူ ဟာကို Red Cliff ဇာတျကားထဲမှာလညျး တှမွေ့ငျခဲ့ရပါတယျ။ COC Game မှာလညျး တရုတျ Player တှဟော အဆိုပါ ဗြူ ဟာကို အသုံးပွုပွီး Def Base တှေ တညျဆောကျပွခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယခု အငွငျးပှားနရေတာကတော့ ထိုအခြိနျမှာ ခုံမငျဟာ ခနျြသုမှာပဲ ရှိနခေဲ့တာလို့ ဆိုတာကွောငျ့ အဆိုပါ ဝင်ျကဘာကို တညျဆောကျခဲ့သူဟာ ဟှမျခနျြယနျပဲလား။ ကြူးကော့လနျြ့ရဲ့ အစီအမံတှကေို ဦးဆောငျပေးခဲ့သူဟာ ဟှမျခနျြယနျလား သူကိုယျတိုငျပဲလား။ ဒီဗြူ ဟာက အမှနျတကယျတော့ အပွငျလကျတှမှေ့ာ အလုပျဖွဈနိုငျရဲ့လားဆိုတာကို ငွငျးခုနျကွတဲ့ Website လညျး ရှိပါသေးတယျ။ စိတျဝငျစားရငျ အဲ့မှာ သှားပွီး ငွငျးခုနျလို့ ရပါသေးတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ အဲ့ထဲက ကောငျးမယျထငျတဲ့ comment တဈခုကိုပဲ ယူရေးလိုကျပါတယျ။
လြူ စနျ့ လကျထကျမှာ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ ရှုနယျမွကေို တိုးခြဲ့ခဲ့ပွီး တိုငျးပွညျအငျအားကို ခိုငျမာအောငျ လုပျခဲ့ပါတယျ။ ဆကျဆံရေး အဖုအထဈတှေ ရှိခဲ့တဲ့ ဝူတိုငျးပွညျနဲ့လညျး ပွနျလညျ မဟာမိတျဖှဲ့ခဲ့ပါတယျ။ ထကွှနတေဲ့ တောငျဘကျ ရှုနယျမွတှေကေို နှိမျနငျးပွီး နောကျပိုငျးမှာ မွောကျဘကျ ခြောငျခြောငျရဲ့ ဆကျခံသူတှေ ဖွဈတဲ့ ဝတေိုငျးပွညျကို ကြူးကြျောဖို့ စီမံခဲ့ပါတယျ။ တောငျဘကျနယျမွတှေကေို နှိမျနငျးတုနျးက ပျေါပေါကျလာခဲ့တဲ့ ပေါကျစီ သမိုငျးကွောငျးလေးကို ပွနျဖျောပွပေးပါ့မယျ။ မှတျစုကွမျးမှာလဲ တခါက တငျပေးပွီးသားလေးပါ။
ကြူးကော့လနျြ့ တီထှငျခဲ့တဲ့ ပေါကျစီ
ပေါကျစီ 包子 ပေါငျးကစျြ့ Bao Zi
ကြူးကော့လနျြ့ (Zhuge Liang) ဟာ နနျမနျ (Nanman) တောငျးပိုငျးနယျက တောငျပိုငျးသား ဂူနလေူရိုငျးမြားကို တိုကျခိုကျနှိမျနငျးဖို့အတှကျ သူ့ရဲ့ စဈတပျကွီးနဲ့ အတူ ခြီတကျလာပါတယျ။ လုရှေ (Lu Shui) မွဈကမျးပါးကိုရောကျတဲ့အခါ ဒသေခံတှကေ ဒီမွဈဟာ နတျကွီးတယျ၊ ဖမျးစားတတျတယျ၊ လူတှသေအေောငျ ပွုစားနိုငျတယျ၊ ဒါကွောငျ့ ဒီမွဈစောငျ့နတျကို ကနြေပျအောငျ ပူဇျောပသမှ ရမယျလို့ ကြူးကော့လနျြ့ကို ပွောကွပါတယျ။ ဘယျလို ပူဇျောရမလဲလို့ ကြူးကော့လနျြ့က မေးတော့ ဖမျးဆီးရမိတဲ့ နနျမနျလူမြိူး ၄၉ ဦးကို သတျပွီး၊ သူတို့ဦးခေါငျးနဲ့ ယဇျပူဇျောရမယျလို့ ပွောကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ ကွငျနာတတျတဲ့ နှလုံးသားပိုငျရှငျ ဖွဈတဲ့အတှကျ တကယျ့ လူအစဈရဲ့ ဦးခေါငျးတှအေစား လူ့ဦးခေါငျးပုံ သဏ်ဍနျတူ မုနျ့တှလေုပျပွီး နတျကို ပူဇျောပသပါသတဲ့။ အဲဒီအခြိနျကစပွီး နနျမနျ လူမြိူးတှရေဲ့ ဦးခေါငျးမြားနဲ့ သဏ်ဍနျတူ ပေါကျစီလုပျစားကွတဲ့ ဓလဟေ့ာ စတငျလာခဲ့ကွတယျလို့ အဆိုရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အမြားစုအထငျ အမြိူးသမီး ရငျသားနဲ့ တူတယျဆိုတာ မဟုတျပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ ပေါကျစီကို တရုတျဘာသာနဲ့ နောကျတမြိူး မနျထို (Man Tou) 馒头 馒 မနျဆိုတာက ဂြူံပေါငျး
头 ထို ဆိုတာက ဦးခေါငျးကို ပွောတာပါ။ မနျထိုကို နောကျတမြိူး လူရိုငျးရဲ့ဦးခေါငျးလို့လဲ အဓိပ်ပါယျ ရပါသေးတယျ။ အင်ျဂလိပျလိုတော့ Steamed လို့ချေါဆို သုံးနှုနျးကွပါတယျ။ ပေါကျစီအမြိူးအစား မြားစှာရှိသေးပမေယျ့ ယဘေုယအားဖွငျ့တော့ Dàbāo 大包 သာ့ပေါငျးလို့ချေါတော့ ၆ လကျမ အဝိုငျးရှိ ပေါကျစီနဲ့ (အမြားစုက ဆိုငျမှာ အလှယျတကူ ဝယျစားနိုငျပွီး) Xiǎobāo 小包 ရှောငျပေါငျးလို့ ချေါတဲ့ ၃ လကျမအဝိုငျး သို့မဟုတျ ထိုထကျ သေးငယျတဲ့ ပေါကျစီသေး (စားသောကျဆိုငျနဲ့ ဘူဖေးမှာ အမြားဆုံး ရောငျးခြ) ဆိုပွီး ၂ မြိူးအပျေါမှာပဲ အခွခေံကာ ခှဲထှကျလာတဲ့ ပေါကျစီမြိူးကှဲမြား ဖွဈကွပါတယျ။
မနျထိုနဲ့ ပေါငျးကစျြ့ ကှာခွားခကျြ
ယှမျခတျေ မှနျဂိုအုပျစိုးခြိနျမှာ အစ်စလာမျနိုငျငံတှနေဲ့ ဆကျဆံရေး ရှိနခြေိနျဆိုတော့ သူတို့ဟာ အစာသှပျထားရငျ မစားတာကွောငျ့ အစာလှတျပေါကျစီ Manti ကို လုပျစားလာကွပါတယျ။ ကွာတော့ Mantou လို့ အလှယျချေါပမေယျ့ အချေါ ၂ မြိူး ရှိတယျဆိုတာ သိရပါတယျ။ ပထမက မနျထိုလို့ချေါပွီး စုနျ့ခတျေမှာတော့ အဓိက အစာသှပျထားတဲ့ ဂြူံလုံးကို ပေါငျးကစျြ့လို့ ချေါလာကွတယျ ပေါငျး ဆိုတာ ထုပျပိုးတာ ဋ်ဌာပနာထညျ့တာပေါ့။
သစုနျ့ခတျေမှာ ဋ်ဌာပနာထညျ့သှငျးထားတဲ့ ပေါကျစီရှိသလို မထညျ့ထားတဲ့ ပေါကျစီလညျး ရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ ဋ်ဌာပနာထညျ့ထားတာကို ပေါငျးကစျြ့ ပေါကျစီလို့ ချေါပွီး မထညျ့ထားတာကိုတော့ မနျထိုလို့ပဲ သုံးနှုနျးခဲ့ကွပါတယျ။
ကြူးကော့လနျြ့ရဲ့ နောကျဆုံးတိုကျပှဲ
၂၂၈ ခုနဈကစလို့ ဝတေိုငျးပွညျကို ကြူးကြျောမှု ငါးကွိမျ လုပျခဲ့ပွီး လေးကွိမျ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ ၂၃၁ ခုနဈ မတိုငျခငျအထိ ပွိုငျဘကျ မရှိခဲ့ပါဘူး။ စဈသညျ အကအြဆုံး နညျးနညျးနဲ့ အောငျမွငျမှုမြားကို ရအောငျ ယူခဲ့တာနိုငျတာပါပဲ။ လြူ ပလေ့ကျထကျက ထောငျခြီ အရအေတှကျ မြှသာ ရှိတဲ့တပျ တှဟော သူ့လကျထကျမှာတော့ ၂ သိနျးအထိ အငျအား တောငျ့တငျးခဲ့ပါတယျ။ ၂၃၁ ခုနဈမှာ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ သူနဲ့ ညဏျရညျတူ ပွိုငျဘကျ စီးမာယိ နဲ့ စတငျ ယှဉျပွိုငျ တိုကျခိုကျခဲ့ပွီး ခြီတောငျကုနျးတိုကျပှဲဟာ သူ့ရဲ့ ငါးကွိမျ ကြူးကြျောစဈ ထဲကနေ ပထမဆုံး အကွိမျအဖွဈ အရှုံး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ၂၃၄ ခုနဈ နှောငျးပိုငျး ဝူကနျြးလှငျပွငျ တိုကျပှဲမှာ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ စီးမာယိနဲ့ ထပျမံ တိုကျခဲ့ရပွီး တဈဖကျနဲ့ တဈဖကျ အသာမရခဲ့ပါဘူး။ ကြူးကော့လနျြ့ဟာ သူ့ရဲ့ ဘယျကိစ်စမဆို အသေးစိတျ စီမံတတျတဲ့ အကငျြ့ကွောငျ့ ကနျြးမာရေး ခြိူ့ယှငျးပွီး အသကျ ၅၃ နှဈ အရှယျ (၁၈၁ -၂၃၄) သူ့ရဲ့ တပျတဲစခနျး အတှငျးမှာပဲ ကှယျလှနျ ခဲ့ပါတယျ။ သူမသခေငျ မှာတော့ တိုငျးပွညျ နောငျရေး စိတျခရြအောငျ ကနျြ့ဝမျ နဲ့ ဖေးယီကို သူ့နရော ဆကျခံဖို့ မှာကွားခဲ့ပါတယျ။ ကြူးကော့လနျြ့ ကှယျလှနျခြိနျမှာ လြူ စနျ့ဟာ ကြူံးဝူဘှဲ့ ခြီးမွှငျ့ခဲ့ပွီး နောကျဆုံး ဆန်ဒအရ သငျးကြှငျးတောငျမှာ ရုပျအလောငျးကို မွုပျနှံခဲ့ပါတယျ။
ကြူးကော့လနျြ့မှာ အကိုတဈယောကျ ညီတဈယောကျ ညီမတဈယောကျ ရှိပွီး ဟှမျယှဲ့ယငျးနဲ့ လကျထပျခဲ့ကာ သား ၂ ယောကျ မှေးဖှားခဲ့ပွီး တဈယောကျကတော့ စဈပှဲမှာပဲ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
ကြူးကော့လနျြ့၏ တီထှငျမှုမြား
ကြူးကော့လနျြ့ဟာ မနျထိုပေါကျစီ မွမွှေုပျမိုငျးနဲ့ လနျခြားကဲ့သို့သော သယျဆောငျရ လှယျကူစရေနျ ပွုလုပျထားသညျ့ သယျယူပို့ဆောငျရေး အနှေးယာဉျမြားကို တီထှငျခဲ့သညျ။ သူ၏ တီထှငျမှုမြားထဲမှ နာမညျကြျော တီထှငျမှုမှာ 諸葛弩 Zhuge Nu ချေါ မောငျးပွနျဒူးလေးကို တီထှငျခဲ့သညျ။ မောငျးပွနျဒူးလေးမှာ ယနခေ့တျေ မောငျးပွနျသနေတျတို့၏ မူလအစ ဖွဈပွီး ထိရောကျမှု အကှာအဝေးမှာ ပေ ၂၆၀ အတှငျးသာ ဖွဈသညျ့အတှကျ ထိရောကျမှု အကှာအဝေး နညျးပါးသျောလညျး အနီးကပျတိုကျပှဲမြားတှငျ ပဈအားမှာ အရေးပါသညျ ဖွဈသညျ့အတှကျ ထိရောပျမှု ရှိသညျဟု ဆိုရပမေညျ။ ထို့ပွငျ တပျတှေ အခငျြးခငျြး ညခငျးဆကျသှယျရာတှငျ လှယျကူစရေနျ ခုံးမငျမီးပုံးဟု ချေါသော မီးပုံးမြားကို အသုံးပွုခဲ့သညျ။ ထိုအကွောငျးကို သိသညျ့ စီးမာယိသညျ ဖငျးယနျတိုကျပှဲကို ကြူးကော့လနျြ့ကို လှညျ့စားကာ အနိုငျယူခဲ့ပသေညျ။ ကြူးကော့လနျြ့ ရေးသားခဲ့သော စာပမြေားတှငျ Thirty-Six Stratagems နှငျ့ Mastering the Art of War (စှနျးဇူ ရဲ့ The Art of War မဟုတျပါ။) တို့မှာ ထငျရှားသညျ။
ကြူးကော့လနျြ့နဲ့ ပတျသတျပွီး ဘုရားကြောငျးမြားစှာ တညျဆောကျခဲ့ကွတဲ့အနကျ ခနျြသုနဲ့ ပိုငျသုခနျြတို့မှာ တညျရှိတဲ့ ဘုရားကြောငျးတို့မှာ ထငျရှားပွီး ယနထေ့ကျတိုငျ လာရောကျဂါရဝပွုသူ အမြားအပွား လာရောကျကွပွီး စညျးကားလှသညျ။
ရန်အိမ်တော် (သို့မဟုတ်) ရန်စစ်သူကြီး မျိူးနွယ်စု။